မနေ့ကကျနော့ ဇနီးသည်ကိုယ်ဝန်ရှိလို့ ကျနော်တို့နေတဲ့မြို့လေး
(ရွှေကျင်မြို့)မှာ ရှိတဲ့ မိခင်နဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမှာ ကိုယ်ဝန်သွားအပ်တာပါပေါ့ဗျာ..
အဲဒီမှာ (တနင်္လာနဲ့ အင်္ဂါနေ့)နေ့ပဲ မှတ်ပုံတင်တယ်..စစ်ဆေးတယ်ဆိုပါတော့..
တစ်ပတ်မှာ (၂)ရက်ပဲဖွင့်တယ်ဆိုပါတော့...ကျနော်ကလည်း မြို့က (og) ကိုလည်းအပ်ထားပါတယ်..
ဒါအပြင် မိခင်နဲ့ကလေးအသင်းရဲ့ စစ်တမ်းကောက်တဲ့အခါ ကာကွယ်ဆေးတွေဘာတွေညာတွေ လိုအပ်တာတွေ လမ်းညွှန်လို့ရအောင်လို့ မှတ်ပုံသွားတင်ပါတယ်..
အဲဒီမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ ရှစ်ယောက်၊ကိုးယောက်လောက်ရောက်နေကြတယ်လေ..
တစ်ချို့က ခင်ပွန်းကလိုက်ပို့တဲ့ စက်ဘီးလေးနဲ့ လာကြတာပေါ့..
ဒါနဲ့ကျနော့်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကလည်း ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ဝင်သွားတော့ သားဖွားဆရာမလို့ထင်ရတဲ့ (ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်)ထွက်လာပြီးတော့''ဒီနေ့နဲ့မနက်ဖြန်ဆေးခန်းပိတ်တယ်..လကုန်အစည်းအဝေးရှိလို့ နောက်တစ်ပတ်မှဖွင့်မယ်..အားလုံးနောက်တစ်ပတ်မှ
လာကြပါတဲ့..ဒါနဲ့ကျနော်ကလည်း သြော်အဲဒီလိုကြီးလားလို့ ပြန်မေးမိတော့ ကျနော့ကို ဘုကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဗျာ..ဒါနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးတော့ ဆရာမတစ်ဦးရဲ့နာမည်မေးပြီးတော့ သူ့ကိုလာပင့်တာတဲ့..အခုသူလက်ခံထားတဲ့လူနာ (ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်) က
ဗိုက်နာလို့ မီးဖွားတော့မယ်ထင်တယ်လို့လိုက်ကြည့်ပေးဖို့လာပင့်တာပါတဲ့..(နွမ်းပါးတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေက ဆေးရုံမှာမီးဖွားဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့အခါ ကိုယ့်အိမ်မှာပဲကိုယ်မီးဖွားရတယ်လေ..ဒါကြောင့်သားဖွားဆရာမကိုအပ်ထားရတာပေါ့..သားဖွားဆရာမကြတော့အိမ်မှာ
ပဲပင့်ပြီးမီးဖွားကြတော့ သုံးလေးသောင်းလေးနဲ့ပြီးသွားတာလေ) ဒါနဲ့အဲဒီလာပြောတဲ့ဆရာမက ဒီနေ့ဘယ်သူမှ
လိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး..လကုန်အစည်းအဝေးရှိလို့ အားလုံးအစည်းအဝေးတက်ရမယ်..ပျက်ကွက်လို့မရဘူး..ဒါကြော င့် ပြန်တော့လို့ပြောလိုက်တယ်ဗျာ..
ဆရာဝန်တွေလည်းထိုက်သင့်သလောက်ရှိပါတယ်..ဒါပေမဲ့ဗျာ..မယောင်ရာဆီလူးဆိုသလို အစည်းအဝေးရှိလည်း ဂျူတီသမားအလုံအလောက်ချပေါ့..
အခုတော့အရေးပေါ်မီးဖွားမဲ့သူက အစည်းအဝေးပြီးတဲ့အထိစောင့်ပြီးမှ မီးဖွားရမလိုဖြစ်နေရတာ ဘ၀င်မကျလို့ ရေးလိုက်မိတာပါ..
သြော် အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာလည်း လူသစ်စိတ်သစ် စနစ်သစ်နဲ့ ချီတက်ရမှာကို စနစ်ဆိုးအကျင့်ဆိုး လေးတွေက အမွေပါလာသေးပါလားလို့ (အပြုသဘောနဲ့) ရေရွတ်မိပါသေးတယ်..
တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကလည်း ရာထူးအဆင့်ဆင့်ရှိပြီးတော့ ဒီလိုအုပ်ချုပ်မှုကိစ္စလေးတွေတောင် မစီစဉ်ထားဘူးလားလို့..စိတ်တိုင်းမကျ ဖြစ်ပြီး စိုင်းထီးဆိုင်သီချင်းတစ်ပုဒ်ထဲက စာသားလေးကို သတိရလိုက်မိပါတယ်..ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ အကျင့်ဆိုးကို (ပြန်ညှိရမဲ့ကာရန်တစ်ပုဒ်လို့)စဉ်းစားမိပါတယ်ဗျာ ...
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/31/20110အကြံပြုခြင်း
by Kyi Win on Tuesday, May 31, 2011 at 3:56am
ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးလှမြင့်အသစ်တက်သည့်အချိန်ကဖြစ်သည်။ မြို့တော်ဝန်သည် ရန်ကုန်မြို့တော်၏ စည်ပင်ဆိုင်ရာအခွန်အခများအပါအ၀င် အခြားသောဈေးနှုန်းများကိုပါ မြှင့်တင်ရန်ဆန္ဒရှိနေသည်။ သို့သော်မမြှင့်တင်မီ ရန်ကုန်မြို့နေလူထု၏သဘောထား မည်သို့ရှိမည်နည်းဆိုသည်ကို လေ့လာရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်။ ထို့နောက် ရုပ်ဖျက်ပြီးလှည့်လည်ကြည့်ရှုလေသည်။ ပုဇွန်တောင်ဈေးရှေ့သို့အရောက်တွင် အ၀တ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်း ၀တ်ထားသည့် လူတစ်ယောက်ကိုမေးကြည့်လေသည်။
`တကယ်လို့ စည်ပင်အခွန်အခတွေကို ၅၀%မြှင့်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့အနေကျပ်သွားနိုင်မလား´
`အင်း..နေသာထိုင်သာ ရှိမှာပါ။ ရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ လောက်နိုင်ပါတယ်´
မြိုကတော်ဝန်သည် ၀မ်းသာအားရဖြစ်သွားသည်။ ထို့နောက်အားတက်လာသည့်အသံနှင့် ထပ်မေး၏။
`အဲလိုဆိုရင်တော့ တိုက်တစ်လုံးလောက် ဆောက်ရမလားဘဲ´
မြို့တော်ဝန်က စိတ်ဝင်စားသွားပြီး `တယ်ဟုတ်ပါလား။ ဒါနဲ့ ခင်ဗျားက ဘာအလုပ်လုပ်တာလဲဗျ´
31 May 2011 Yeyintnge's Diary.doc
1578K View Download
31 May 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
2896K View Download
31 May 2011 Yeyintnge's Diary
ကရင်လူငယ်များနဲ့ ၀မ်းတထွာ ပြဿနာ
Submitted by Karen Information Center on Tuesday, 31 May 2011
မေလ ၉ရက်။ ခွန်းအယ်သောင့်
“ဘန်ကောက်ပြန်”ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ကရင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကို ရေပန်းစားတဲ့ အရပ်သုံးစကားတလုံး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီ အမည်နာမဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက ပြန်လာတဲ့လူတွေကို တင်စားခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ ကရင်ပြည်နယ်က စကားအသုံးအနှုန်းပါ။ ဘန်ကောက်က ပြန်လာတဲ့သူဟာ သူတို့ရဲ့လုပ်အားခတွေစုပြီး ရပ်ထဲရွာထဲမှာ အိမ်ကောင်းယာကောင်းတွေ ပြန်လာဝယ်နိုင် တဲ့အတွက် အထင်ကြီးသူတွေရှိသလို လူနေမှုအဆင့်အတန်း ပြောင်းလဲလာတဲ့အပေါ် ဆန်းသစ်တဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတွေ ကြောင့်လည်း စက်ဆုတ်ရွံရှာသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
တစ်ဖက်ကကြည့်ရင် ထိုင်းနိုင်ငံကို အလုပ်ထွက်လုပ်ကြခြင်းအားဖြင့် အိမ်မရှိသေးသူတွေလည်း အိမ်ဆောက်နိုင်ပြီး လယ်မရှိ သူတွေလည်း လယ်ယာမြေတွေ ၀ယ်ယူပိုင်ဆိုင်လာတဲ့အပေါ် နေ့စဉ် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လေးနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေ ကြတဲ့ သာမန်လူငယ်လူရွယ်တွေအဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားဖို့ တွန်းအားတခုလို ဖြစ်နေပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်က လူထုတွေဟာ မိသားစု စားဝတ်နေရေးပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ၀င်ငွေကောင်းရရေးအတွက် မျှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းသို့ နည်းမျိုးစုံဖြင့် နေ့စဉ်လိုလိုကူးပြီး အလုပ်ထွက်လုပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ကရင်ပြည်နယ်က ကရင်ပြည်သူတွေ မြောက်များစွာဟာလည်း မိသားစု စားဝတ်နေရေးဆိုတဲ့ စက်ယန္တရားကြီးကို လည်ပတ် နိုင်ဖို့အတွက် နီးစပ်ရာဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ဖြစ်စေ၊ လူကယ်ရီကတဆင့်ဖြစ်စေ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကို အလုပ်ထွက်လုပ်ကြပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ်သမား လက်မှတ်ဖြင့် တရားဝင် အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးထားသူ မြန်မာနိုင်ငံသား တသန်းသုံးသိန်းခန့်ရှိတယ် လို့ ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်သူ အလုပ်သမား အဖွဲ့အ စည်းတွေရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ အလုပ်သမား လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူရော တရားမ၀င် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူပါ ၂သန်းခွဲ ကနေ ၄သန်းအတွင်း ရှိနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီလို ထိုင်းနိုင်ငံထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေထဲမှာ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ ကွင်းကလေးကျေးရွာ က အသက် ၂၀အရွယ် စောချစ်အေးလည်း အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ စောချစ်အေးဟာ လက်ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ရွာမှာ အကောက်အခွန်တွေ နေ့တိုင်းလိုလို လာနေတော့။ ကျနော့်မိဘတွေလည်း ပေးစရာ ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ အဲဒါကြောင့် တဖက်တလမ်းကနေ ပြန်ကူညီနိုင်အောင်လို့ ထိုင်းမှာလာပြီး အလုပ်ထွက်လုပ်တာပါ။”လို့ စောချစ်အေးက ပြောပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး၊ လှိုင်းဘွဲ စတဲ့မြို့နယ်တွေရဲ့ တောနယ်ကျတဲ့နေရာတွေမှာ သက်ကြီးရွယ်အို တွေနဲ့ ၁၀နှစ်အောက် ကလေးသူငယ်တွေကလွဲရင် လူငယ်လူရွယ်တွေ ကုန်သလောက်နီးပါး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ်ထွက်လုပ် ကြပါတယ်။
စောချစ်အေးနဲ့အတူ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်က လမ်းဖားရွာသားတဦးက “ကျနော်တို့ရွာမှာ လူငယ်တွေ ကုန်သလောက် တောင်ပေါ်တက်ပြီး အလုပ်ထွက်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ ရွာဟာ တိတ်ဆိတ်ပြီး လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ ဆက်နေလို့ မပျော်ပိုက်တဲ့အတွက် တောင်ပေါ်ကိုလာဖို့ ဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားတာပါ။”လို့ ပြောပါတယ်။
သူတို့တွေဟာ ထိုင်းမှာ လစာအများကြီး မရရင်တောင်မှ ထိုက်တန်တဲ့ လုပ်အားခရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားခဲ့ကြပေမယ့် ထိုင်းကို ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ကွင်းကလေးရွာသား စောချစ်အေးက “ကျနော် စားသောက်ဆိုင်မှာလုပ်တာ ၁နှစ်လောက်ရှိပြီး အရင်ကတော့ ရေခဲခွဲတဲ့ စက် ရုံတစ်ခုမှာ လုပ်တယ်။ တလကို ၃,၅၀၀ပဲ ရတယ်လေ။ အခု စားသောက်ဆိုင်မှာ ၄၅၀၀ရတယ် ဆိုတော့ အလုပ်ပြောင်းလိုက် တာ။ ဒါပေမယ့် ရတဲ့ပိုက်ဆံကို ဟိုသုံးဒီသုံး ဘာမှ မကျန်တော့ဘူး။”လို့ ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံကို ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ သွားတဲ့လူရှိသလို လူကယ်ရီ(လူမှောင်ခို)ခ ငွေကြေးပေးပြီး တက်လာတဲ့လူတွေက ကယ်ရီခကို ဘတ်ငွေ ၅,၀၀၀ကနေ ၈,၀၀၀အထိ (ကျပ် ၃၀၀,၀၀၀) ပေးရပါတယ်။ အချို့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် လူငယ် တွေဆိုရင် လူကယ်ရီရဲ့ ရောင်းစားမှုကို ခံခဲ့ရသလို အချို့မိန်းကလေးငယ်လေးတွေဆိုရင်လည်း လူကယ်ရီရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတရားပြုကျင့်မှုတွေ ကြုံရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာမှာ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အဆိုးဆုံးအဆင့် ၃မှာရှိနေကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၄ရက်နေ့က အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ ၁၀နှစ်မြောက်မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အစီရင်ခံစာများ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံကို လူကယ်ရီနဲ့သွားတဲ့လူတချို့ဆိုရင် နီးစပ်ရာ ရွာသားတဦးဦးထံမှချေးငွေယူပြီး လူကယ်ရီခ အများကြီး ပေးကာ လမ်းတ၀က်အရောက်မှာ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဖမ်းဆီးမှုခံရတဲ့အတွက် ချေးငွေပြန်မဆပ်နိုင်တော့တဲ့လူတွေ ရှိခဲ့ကြပါ တယ်။
အဲဒီလို ထိုင်းနိုင်ငံကို အလုပ်ထွက်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဆယ်ကျောက်သက်အရွယ် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်း အများအ ပြား ပါဝင်တယ်လို့ ကျောင်းဆရာတွေက ပြောပါတယ်။
ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရှိ အလယ်တန်းပြ ကျောင်းဆရာတဦးက “ကျနော်တို့ ကျောင်းကတော့ ၁နှစ်ကို အနည်းဆုံး ကျောင်းသား ၅ယောက် ၆ယောက် ကျောင်းထွက်ပြီး ဘန်ကောက်တက်ကြတယ်။ သူတို့ မိဘတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲတွေ ကြောင့် ကျောင်းထွက်ပြီး ကျောင်းထွက်တာများပါတယ်။ မိဘတွေလည်း သူုတို့ သားသမီးတွေကို ပညာတတ် ဖြစ်စေချင်ကြပါ တယ်။ အဖက်ဖက်ကလာတဲ့ အကောက်အခွန်တွေ။ ဆက်ကြေးတွေကို မနိုင်လို့ အခုလို သူတို့သားသမီးတွေကို ထိုင်းနိုင်ငံ လွှတ်လိုက်ရတာပါ။”လို့ ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာပြီး အလုပ်ထွက်လုပ်ကြတဲ့ ကရင်ပြည်နယ်က လူငယ်လူရွယ်တွေဟာ အမျိုးသမီးတွေဆိုရင် အိမ်ဖော်အလုပ်၊ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ စားပွဲထိုးအလုပ်နဲ့ ဈေးဆိုင်တွေမှာဝင်လုပ်တဲ့အပြင် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း ၀င်လုပ်တာ လည်း ရှိပါတယ်။ အမျိုးသားတွေကျတော့ စားသောက်ဆိုင်၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဝေါ့ရှော့ဆိုင်၊ ရေခဲစက်ရုံတွေမှာ ၀င်လုပ်တာ များပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တရားမ၀င် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက် အမြင့်ဆုံး လစာတွေကတော့ တစ်လကို ဘတ်ငွေ ၃,၅၀၀က နေ ၆,၀၀၀အထိ ရှိတယ်လို့ မြန်မာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့တွေက ပြောကြပေမယ့် တလကို ဘတ် ၃၀၀၀ကနေ ၅၀၀၀ လောက်သာ ရတယ်လို့ အလုပ်သမားတွေ ပြောပါတယ်။
အခုလို လူငယ်လူရွယ်တွေ ထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်ပြီး အလုပ်ထွက်လုပ်ကြတဲ့အတွက် ကျေးရွာမှာ ကာလသမီး၊ ကာလသားတွေ မရှိကြတော့တဲ့အခါ လူမှုရေးအပိုင်းဖြစ်စေ၊ ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းဖြစ်စေ၊ ဆိုးကျိုးတွေ အများကြီး သက်ရောက်တယ်လို့ ရွာသူကြီး တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
သူက “ရွာတရွာမှာ ကာလသမီး ကာလသားတွေ မရှိကြတော့ဘူးဆိုရင် အလှူတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ ကာလသမီး ကာလသား တွေ ၀ိုင်းကူမဲ့သူ မရှိတဲ့အခါကျတော့ တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်။ နောက်တခုက လူငယ်တွေဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ထိုင်း နိုင်ငံကို ထွက်သွားကြတယ်။ ကိုယ့်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဟာ ဘာလဲဆိုတာ မသိကြတော့ဘူး။ စရိုက်တွေလည်း ပြောင်းကုန်ကြ တယ်။”လို့ ပြောပါတယ်။
မဲဆောက်မြို့ ၀ပ်ရှော့ဆိုင်တဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်က အသက် ၁၆နှစ်အရွယ် လူငယ် တစ်ဦးကလည်း “ရွာမှာဆိုရင် ကျနော်တို့လို ပညာမတတ်တဲ့ လူငယ်တွေဆိုရင် ဘာမှလုပ်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အကုန်လုံးဟာ တောင်ပေါ်ကိုလာပြီး အလုပ်ထွက်လုပ်တဲ့လူချည်းပဲ။ ကျနော် ဒီမှာလာနေတာ ပညာရတယ်။ ပိုက်ဆံလည်းရတယ်။”လို့ ပြော ပါတယ်။
ဒီလိုကရင်လူငယ်တွေ ထိုင်းနိုင်ငံဘက် အလုပ်လုပ်ရင်း မကောင်းတဲ့ စရိုက်တွေကို အတုခိုးလာတာတွေကြောင့် ဘ၀ပျက်ပြီး အသက်ပါဆုံးရှုံးရတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ရှိခဲ့ဖူးသလို တရားမ၀င် နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့အတွက် ထိုင်းရဲတွေရဲ့ ဖမ်းဆီးခံရမှာ ကိုလည်း စိုးရိမ်ရတဲ့အကြောင်း အိမ်ဖော်အလုပ်သမတစ်ဦးရဲ့ မိခင်က ပြောပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ်က ထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ ကျေးရွာတွေက လူငယ်ဦးရေ ၁၀၀နဲ့ ၂၀၀လောက်ရှိတဲ့ရွာဆိုရင် အလွန်ဆုံး ၁၀ဦး ခန့်သာ ရွာမှာ ကျန်ရစ်တော့တယ်လို့ ရွာသားတွေက ပြောပါတယ်။
ကိုယ့်ပြည်နယ်၊ ကိုယ့်ရပ်ရွာအတွက် တိုးတက်သာယာအောင် စွမ်းဆောင်ရမဲ့ လူငယ်လူရွယ်တွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လုပ်အားခ ထင်သလောက်မရပေမယ့် မြန်မာပြည်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အများကြီး ကွာခြားလှတဲ့အတွက် ဘယ်လောက်ပဲ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံရပါစေ ၀မ်းတထွာရဲ့ ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် လက်ရှိအချိန်ထိ ထိုင်းနိုင်ငံကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် အလုပ်ထွက်လုပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှုပိတ်ရန် လက်မှတ်မထိုးသည့် အလုပ်သမများကို ရဲအာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီး
May 31st, 2011 | စာရေးသူ - ရိုးမ ၃ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ကိုးရီယားပိုင် အက်စ်ဂျီအိုင် (SGI) အထည်ချုပ်စက်ရုံ ဖယ်ရီကားတိမ်းမှောက်ခဲ့သည့်အမှုကို ပိတ်ရန် ကားသမားက အာဏာပိုင်များနှင့်ပေါင်းပြီး အလုပ်သမားများကို လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့ရာတွင် လက်မှတ်မထိုးပေးသည့် အလုပ်သမနှစ်ဦးကို ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ မငေးစုကျေးရွာမှ မချိုချိုလွင်နှင့် မဝေဝေသင်းတို့ နှစ်ဦးအား ကားတိမ်းမှောက်မှု မဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းသည်ကို ငြင်းဆန်သည်အတွက် ဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထန်းတပင်ဒေသခံ ကိုတင်မောင်ဆန်းက ပြောသည်။
“ကောင်မလေးတွေကို သက်သေထွက်ခိုင်းချင်တာ၊ ကားမှောက်ထားတဲ့ ဒရိုင်ဘာက ပိုက်ဆံပေးပြီးလွတ်ချင်တော့ ဒီကောင်မလေးတွေက ကားမမှောက်ပါဘူးဆိုပြီး လက်မှတ်ထိုးပေးမှ ဒရိုင်ဘာက လွတ်မှာ၊ ကောင်မလေးတွေကလည်း သူတို့ခံထားရတော့ မကျေအေးချင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်၊ ဥပဒေအတိုင်းဘဲဖြစ်စေချင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားသူများမှာ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ တပ်သစ်ရဲစခန်းနှင့် ပန်တိုင်စခန်းတို့မှ ရဲအာဏာပိုင်များဖြစ်ပြီး အဆိုပါအလုပ်သမနှစ်ဦးအား တရားလိုပြသက်သေထွက်ဆိုရန် ချိန်းဆိုရာသို့ မလာရောက်သည့်အတွက်ဟု အကြောင်းပြ ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“မဖမ်းခင်မှာ ကောင်မလေးတွေ မိဘကို ရွာထိပ်က လဖက်ရည်ဆိုင်မှာခေါ်ပြီး ရဲတွေက အကြိမ်ကြိမ် အကြောင်းကြားတယ် မလာဘူး၊ အခု အဖမ်းခံမလား ကျနော်တို့ ဖမ်းရမလားဆိုပြီးပြောတယ်၊ ကလေးမိဘတွေက ကျမတို့ ကလေးတွေက ကျန်းမာရေးမကောင်းသေးဘူး၊ အဲဒါကြောင့် မလာနိုင်တာဆိုတော့ အာဏာပိုင်တွေက အစကတည်းက ပြောပါလားဆိုပြီး ပြောတယ်၊ ကလေးမိဘတွေက ကျမတို့ အစကတည်းပြောပါတယ်၊ လူကြီးမင်းတို့ဘက်က ဘာမှ မလုပ်ပေးတာပါဆိုပြီး ပြောခဲ့တယ်” ဟု ထန်းတပင်ဒေသခံ ကိုတင်မောင်ဆန်းက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ အလုပ်သမနှစ်ဦးအား တရားရုံးတွင် လိုပြသက်သေထွက်ဆိုရန် ဆင့်ခေါ်မှုများရှိခဲ့သော်လည်း တရားဝင် စာရွက်စာတမ်းမူရင်းဖြင့် လာရောက်အကြောင်းကြားခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ ကျေးရွာအာဏာပိုင်က ညအချိန်မှ သောက်စားပြီးလာရောက် ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“တရားလိုပြသက်သေအဖြစ် လာခေါ်တယ်၊ ကလေးမလေးတွေကလဲ ဒဏ်ရာရှိနေတယ်ဆိုတော့ မသွားနိုင်ဘူး၊ နောက်ပိုင်းကျတော့ သူတို့ ခေါ်စာပို့တယ်၊ မူရင်းတော့မပါဘူး မိတ်တူတွေဘဲ ပေးတယ်၊ လာခေါ်တော့လဲ ဥက္ကဌက မူးပြီး ည (၁၀) နာရီလောက် မိန်းကလေးတွေနေတဲ့အိမ်ကို လာခေါ်တော့ ကလေးမလေးတွေက ကြောက်တယ်၊ အဲဒါတွေကြောင့် ရုံးပြင်ကနားကို မသွားရဲတာလည်း ပါတယ်” ဟု ဆက်ပြောသည်။
ယင်းဖယ်ရီကားတိမ်းမှောက်စဉ်က အလုပ်သမား ၂၂ ဦးစလုံး ဒါဏ်ရာရှိခဲ့ပြီး အချို့မှာ အလုပ်ပြန်ဆင်းနိုင်ကြသော်လည်း မဝေဝေသင်းနှင့် မချိုချိုလွင်တို့မှာ ဆေးဝါကုသမှု လုံလောက်စွာမရရှိခဲ့သည့်အတွက် ယနေ့အထိ ရောဂါပျောက်ကင်းခြင်း မရှိသေးကြောင်း ကိုတင်မောင်ဆန်းက ပြောသည်။
“သူတို့ စဖြစ်တုန်းကဆိုရင်လဲ ဆေးရုံရောက်ပြီး တနာရီလောက်ကြာတဲ့အထိ ဘာမှ မလုပ်ပေးဘူး၊ ဒဏ်ရာနာလို့ အော်နေရာ၊ ပြီးတော့မှ ဆရာဝန် တွေရောက်လာပြီး ဓါတ်မှန်ရိုက် ဘာညာလုပ်တယ်၊ ပြီးတော့ တာဝန်ရှိသူတွေရောက်လာပြီး ဆေးရုံက အတင်းမောင်း ထုတ်တယ်၊ ဒီလိုကျိုးပဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာနဲ့ ဆေးရုံတက်တယ်ဆိုရင် ဆေးရုံမှာ လူတောင်ဆန့်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ပြောတယ်၊ ပြန်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း ဆေးကုသမှု လုံလုံလောက်လောက် မရဘူး၊ ဆေးရုံမှာလဲ ဆေးကုသမှု ကောင်းကောင်းမရတော့ တချို့သူတွေလဲ အရိုးတွေ ငေါထွက်နေတယ်၊ လမ်းကောင်းကောင်း မလျှောက်နိုင်ဘူး၊ ခေါင်းတွေလည်း ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်တွေဖြစ်ကြတုန်းဘဲ၊ တချို့ပျောက်သွားတဲ့ သူတွေကတော့ အလုပ်ပြန်ဝင်နေကြတယ်၊ တချို့ ကလေးတွေက လုံးဝပြန်မလုပ်နိုင်ဘူး” ပြောသည်။
အဆိုပါ ကားမှောက်မှုမှာ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အလုပ်သမားအနေဖြင့် တစုံတရာ နစ်နာကြေး ရရှိခြင်းမရှိခဲ့သည့်အပြင် တရားခံဖြစ်သူက ယခုကဲ့သို့ အာဏပိုင်များနှင့်ပေါင်းကာ အလုပ်သမားများအား ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
by Myint Myint Khin Pe on Tuesday, May 31, 2011 at 5:53am
ကျွန်မငယ်ငယ်ကတည်းက ရုပ်ရှင်မကြည့်တက်ခဲ့ပါ။ တစ်နှစ်နေလို့ တစ်ခေါက်ရုပ်ရှင်ရုံကို မရောက်ခဲ့ပါဘူး။ ရှင်းရှင်းဝန်ခံရရင် ကျွန်မရုပ်ရှင်လုံးဝ မကြိုက်ခဲ့ပါ။
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကျော်သူရယ်လို့ ဖြစ်လာမယ့် ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့စဉ် ကလည်း သူဟာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက် မဟုတ်သေးပါဘူး။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေး မောင်ကျော်ဝင်း (ခ) မောင်မောင်ပါ။ သို့သော်လည်း ဘ၀ကံ အကျိုးပေးကြောင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကျော်သူ၏ ဇနီးအဖြစ်နဲ့ ဘ၀လမ်းကို လျှောက်လှမ်းခဲ့ရပါတော့တယ်။
တကယ်တော့ သူရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ရတာ ကျွန်မရဲ့ ပယောက မကင်းဘူး လို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အိမ်ထောင်ကျပြီး မကြာခင်မှာပဲ သူ့ရဲ့ အမနဲ့ ညီတို့ဟာ နိုင်ငံရပ် ခြားကို ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီတော့ သူ့ရဲ့မိဘများက ကျွန်မ တို့ကိုလည်း နိုင်ငံခြားသွားဖို့ တိုက်တွန်းကြပါလေရော။ ကျွန်မက မြန်မာပြည်ကို သိပ်ချစ်တဲ့သူ၊ မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ဘဲ နေချင်တဲ့သူ။ ကျွန်မမိဘတွေကိုလည်း မခွဲနိုင်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်မသာ မြန်မာပြည်မှာနေရမယ်ဆိုရင် သူလုပ်ချင်တာ လုပ်နိုင်တယ်လို့ ခွင့်ပြုလိုက်ရာက သူဟာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကျော်သူရယ်လို့ ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ အဲဒီမှာ ကျွန်မတစ်ခါမှ အိပ်မက်တောင် မမက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘ၀ကို မကြိုက်နှစ်သက်ဘဲနဲ့ လက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်မတစ်ခါတလေ သူ့ကို “ပြည်သူပိုင်ကြီး”လို့ ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟုတ်တယ် လေ။ ကျွန်မလိုချင်တာက ငြိမ်းအေးတဲ့ ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်ဘ၀လေး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မရခဲ့တာက …. ထားလိုက်ပါတော့။ ကျွန်မပြောချင်တာက။ ကျွန်မရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဇနီးဘ၀ကို မကြိုက်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုပါ။
ဒီလိုနဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းကြီး စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁) ရက်နေ့ကို ရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။ အဲဒီမတိုင်ခင် (၃) နှစ်လောက်ကတည်းက ကျွန်မဖေဖေရဲ့ နှစ်မ၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ် မြန်မာစာပါမောက္ခ ဒေါ်လှမြတ်ဆီက သူ နာယက အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ မန္တလေး ဗြဟ္မာစိုရ်အသင်းကြီးအကြောင်းကို ကြားသိနေခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မလေ ကျွန်မချစ်တဲ့ ကျွန်မတို့ လူမျိုးတွေအတွက် အကျိုးရှိမယ့် အဲဒီအလုပ်ကို ရန်ကုန်မှာလုပ်ဖို့ အရမ်းကို စိတ်အားထက် သန်ခဲ့တယ်။ တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးတွေယဉ်နေတုန်း အဒေါ်က ရန်ကုန်မှာ ဘဘ ဦးသုခတို့၊ ဆရာဦးအောင်သင်းတို့ စလုပ်ကြမယ်လို့ သတင်းပေးလာတော့။ ၀မ်းသာ အားရနဲ့ ကျွန်မတို့ အလှူငွေလည်း ထည့်ဝင်ရင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင်လည်း ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်မ မြန်မာပြည်မှာ နေလိုက်ရကျိုးက အခုမှ နတ်တော့တာလေ။ ကိုယ်လည်း ကုသိုလ်ရ၊ အများလည်း အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကို လုပ်လိုက်ရလို့ ကျွန်မအရမ်းကျေနပ်ပြီ။
အဲဒီထက် ကျေနပ်ရတာကတော့ ကျွန်မတို့အသင်းဟာ ထင်ထားတာထက်ပိုပြီး အချိန်တိုတိုနဲ့ လူသိများ အောင်မြင်လာခဲ့ရတာဟာ အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲလို့ သေချာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်မတို့ အသင်းမှာ နာမည်ကျော်ကြား လူသိများပြီးသား၊ လူချစ်လူခင်များပြီးသား အနုပညာရှင်တွေ ပါနေကြ လို့ဆိုတာ ကျွန်မလုံးဝ မငြင်းနိုင်ပါ။ ဟုတ်တယ် လုံးဝမငြင်းနိုင်ပါ။ အကယ်ဒမီခြောက်ထပ်ကွမ်း ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ၊ စာရေးဆရာကြီး ဦးသုခ၊ စာရေးဆရာကြီး ဦးအောင်သင်း၊ အကယ်ဒမီရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ ကျော်သူ၊ စာရေးဆရာမ သန်းမြင့်အောင်တို့ရဲ့ အနုပညာသြဇာဟာ သည်နေရာမှာ ဘယ်လောက်ထိသက်ရောက် အကျိုးပြုနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့အသိဆုံးပါ။
၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၈) ရက်နေ့မှာ ရွှေဟင်္သာတောရ၊ သီရိမန္တစံကျောင်းတော် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တရာဇိန္ဒာဘိဝံသ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ဒါယကာ၊ ဒါယကာမများဖြစ်တဲ့ ဦးဋ္ဌေး အောင်ဝင်း ဇနီးဒေါ်ဆွေဆွေဝင်းနဲ့ ရဟန်းဒါယကာမကြီး ဒေါ်ခင်စောနွဲ့တို့ ဦးဆောင်တဲ့ ဆွေမျိုးတစ်စု က နာရေးကူညီမှုအသင်းအတွက် အလှူငွေကို ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ ရေစက်သွန်ချ လှူဒါန်း လိုကြောင်း ပြောကြားတဲ့အတွက် အလှူငွေသွားရောက် လက်ခံပေးခဲ့ကြရပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးကို ရှိခိုးကန်တော့ မိတ်ဆက်စကား လျှောက်ထားကြတဲ့အခါ ကိုကျော်သူကို ဆရာတော်ကြီးက သူ့ရဲ့ ဒကာမတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန် သံအမတ်ကြီး ဒေါက်တာ ကျော်ဝင်း ကတော် ဒေါ်ကြည်ကြည်ရဲ့တူ အနုပညာလုပ်နေတဲ့ တစ်ယောက်လာလို့မေးတော့ ကိုကျော်သူက ဟုတ်မှန် ကြောင်း ယခု နာရေးကူညီမှုအလုပ်ကိုလည်း လုပ်နေကြောင်း ပြန်လည်လျှောက်ထားရာ ဆရာတော် ကြီးက “အေးပေါ့ သံဃာတွေ စာမေးပွဲအောင် အောင်၊ ဘွဲ့တံဆိပ်ရအောင် ဖြေဆိုထားကြသလိုပေါ့။ ဂုဏ်အရှိန်ရှိတော သာသနာပြုရတာ ပိုတွင်ကျယ် သလို၊ နာမည်ရှိပြီးသား ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဆိုတော့ လူမှုရေးလုပ်ရတာ ပိုလွယ်ကူ အောင်မြင်လွယ်တာပေါ့။” လို့ မိန့်ကြားလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းနဲ့ပဲ ကျွန်မလေ ကျွန်မခင်ပွန်းဟာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်နေတာကို ကျေနပ်မိပါပြီ။
(ဆောင်းပါးအသစ် မရေးနိုင်သေးခင်မှာ ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့ထုတ် အလင်းတန်း ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ဘူးတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ပထမဆုံးဆောင်းပါးကို ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကို နာရေးကူညီမှုအသင်းက ထုတ်ဝေတဲ့ “ပေးဆပ်နေသူများ” စာအုပ်ထဲမှာလည်း ထည့်သွင်းခဲ့တော့ ဖတ်ဖူးတဲ့သူတွေလည်း ရှိကြမှာပါ။ မဖတ်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ အသစ်ပေါ့။)
အင်းစိန်ထောင် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြပွဲ နှင့် Black September
လင်းသန့် Tuesday, 31 May 2011 14:25 အောက်မေ့ဖွယ်
ယခုရက်ပိုင်းတွင် ထောင်တွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြခြင်း သတင်းများ ကြားရသော အခါ တချိန်က အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြခဲ့စဉ်က အတွေ့အကြုံများကို ပြန်လည် မြင်ယောင် ခံစားမိရင်း ဆန္ဒပြသူများအတွက် လွန်စွာ စိုးရိမ်ပူပန်မိပါသည်။
သက်ရှိသတ္တ၀ါတိုင်း၏ အသက်သည် ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရတို့ ပေါ်တွင် တည်မှီသည်။ ထိုအထဲတွင် အာဟာရသည် လူသားတိုင်း၊ သက်ရှိသတ္တ၀ါတိုင်း အသက် ရှင်သန်စေသည့် အဓိက အကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။ မြန်မာစကားပုံ တခုတွင် ထမင်းအသက် ၇ ရက်၊ ရေ အသက် ၁ မနက်ဟု ဆိုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဘ၀တွင် အစာအာဟာရသည် အရေးကြီးသည့် အသက် ရှင်သန်ရာဖြစ်သည်။ သို့သော် အသက်သေဆုံး ရမည်ကို မကြောက်ဘဲ မိမိ၏ ယုံကြည်ချက်နှင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာနေသည့် တောင်းဆိုချက် တစုံတရာကို အစာငတ်ခံ၍ မိမိဆန္ဒကို ထုတ်ပေါ်ပြသခြင်းသည် ဘ၀တွင် အမြင့်မားဆုံး စွန့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အာဏာရှင်လက်အောက် မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အကျဉ်းထောင်များထဲတွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများက မကြာခဏ ဆိုသလို အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြလေ့ ရှိသည်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြတ် အသတ် အနိုင်ရခဲ့သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD) ကို န-၀-တ စစ်အစိုးရက အာဏာမအပ်သဖြင့် အာဏာလွှဲပေးရေး၊ မတရား အကျဉ်းချခံထားရသူများအား ခြွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရေး၊ အကျဉ်းသား အခွင့်အရေးများအတွက် အင်းစိန်ထောင်မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနှင့် အခြား သေဒဏ်ကျ အကျဉ်းသားများ စုစုပေါင်း ၂၀၀ ခန့်က အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြကြသည်။
ထိုဖြစ်ရပ်သည် ဂန္ဓီကြေညာချက်၏ အကျိုးဆက်ဟု ပြောလျှင် ရမည် ထင်ပါသည်။ အနိုင်ရပါတီ NLD မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအ၀င် တခြား နိုင်ငံရေးပါတီ များမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များသည် ရန်ကုန်မြို့ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းရှိ ဂန္ဓီခန်းမတွင် စုဝေးပြီး ၁၉၉၀ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားကာ စစ်အစိုးရ၏ ကတိ အတိုင်း လွှတ်တော် ခေါ်ပေးရမည်ဟု တောင်းဆို ကြေညာခဲ့သည်။
ကြေညာချက်ထုတ် တောင်းဆိုစာများလည်း ထောင်တွင်းရှိ ကျနော်တို့ လက်ဝယ်ရောက်ရှိနေကြပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အပါအ၀င် အခြား ကြိုးသမားများ(သေဒဏ်ကျ အကျဉ်းသားများ)ကလည်း စစ်အစိုးရ၏ မရိုးသားမှု၊ ကတိ မတည်မှု အပေါ် မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြချိန်လည်း ဖြစ်သည်။
အင်းစိန်ထောင် အဆောင် ၃၊ ၄၊ ၅ တို့ရှိ အခြေခံပညာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ (အ-က-သ) အဖွဲ့ဝင်များ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများက အဆိုပါ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြမှုကို စတင်ခဲ့ရာ ထိုသတင်းသည် အင်းစိန်ထောင် အမျိုးသမီးဆောင်သို့လည်း ပျံ့နှံ့ ရောက်ရှိသွားသည်။
အ-က-သ ကျောင်းသားငယ်များ၏ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြခြင်းသည် Black September ဟု နာမည်ကြီးသော အင်းစိန်ထောင်တွင်း ကြီးမားသည့် ထောင်တွင်း တိုက်ပွဲကို ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
အဆိုပါသတင်းကို ကြိုးတိုက်မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အပါအ၀င် ကျန် သေဒဏ်ကျ အကျဉ်းသားများက စိုးစင်းမျှ မသိခဲ့ကြပေ။ အင်းစိန်ထောင် ထောင်ပိုင်အဆင့် ၂ ဗိုလ်မှူးအုန်းဖေ၊ ထောင်ပိုင်အဆင့် ၁ ဦးဘိုကြည် (အထူးထောင်ပိုင်) ၊ ထောင်ပိုင်လေး ဦးလှကြည်၊ ဦးဇော်အုံး စသည်တို့နှင့် အင်းစိန်ထောင်တွင်း တာဝန်ကျ စစ်ထောက်လှမ်းရေးများက သတင်း မကူးစက်စေရန် တိုက်ဝန်းသို့ အ၀င်အထွက် တင်းကျပ်ထားသည်။
သေဒဏ်ကျ ကြိုးသမားများ ၁၀ ယောက်တတွဲစီ ရေချိုးဆင်းချိန်၌ အမျိုးသမီးဆောင်ဘက်မှ အုတ်ရိုးကို ကျော်ပစ်လိုက်သော အထုပ်တထုပ်ကို ကြိုးသမားတယောက်က ကောက်ရလိုက်သည်။
အ-က-သများက တိုက်ပွဲဝင် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေကြကြောင်း ပလတ်စတစ်ပေါ် ရေးထားသော စာတစောင်နှင့် သနပ်ခါးတခဲ အထုပ်ထဲတွင် ပါလာသည်။ အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများက ပေးပို့လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
စာကြောင့် တိုက်ဝန်းအတွင်းရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ပူးပေါင်း ပါဝင်ရေး၊ ကြိုးတိုက်ရှိ အကျဉ်းသားများ အလှည့်ကျ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြ ကြရေး အတွက် တိုင်ပင်ကြသည်။
“ထောင်တွင်းတိုက်ပွဲ ဖော်တဲ့အခါ အထူးသဖြင့် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမယ် ဆိုရင် သေချာ စဉ်းစားကြပါ၊ ဖြစ်နိုင်ရင် နိုင်ငံ ရေး တောင်းဆိုမှု မလုပ်နဲ့၊ အကျဉ်းသားရပိုင်ခွင့်ပဲ တောင်းကြတာ ပိုကောင်းတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ရင် မင်းတို့အကုန် သေသွားတာပဲ အဖတ်တင်မယ်” ဟု အမှတ် ၁ တိုက်မှ ၀ါရင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားကြီး ဦးမန်းဒါဝိတ်က ကျနော်တို့ကို အကြံပေးသည်။
အစာငတ်ခံဆ န္ဒပြပွဲများကို ထောင်အာဏာပိုင်များက ကြမ်းတမ်း ရက်စက်စွာ ဖြေရှင်းတတ်ကြောင်း လေ့လာ သိရှိထားသဖြင့် ဖြိုခွင်းခံရမှုခြင်း အတူတူ နိုင်ငံရေး တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ရန် ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၅ ဦး ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်။
“ဒါက မင်းတို့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ မင်းတို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒမပြခင် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရမှာတွေကို မင်းတို့ လုပ်ဆောင်ရမယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် မင်းတို့ ၄ ရက်မကျော်ဘူး” ဟု ဦးမန်းဒါဝိတ်က အကြံပေးခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြရာတွင် တယောက်ကျ၊ တယောက်တက်စနစ် သုံးရေး တိုင်ပင်ကြသည်။
ပထမအဆင့် အလှည့်ကျ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြကြမည့်သူများသည် နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်ဖြင့် စစ်အစိုးရက သေဒဏ် ချမှတ်ခံထားရသူများ ဖြစ်သည်။ မနက်ဖြန်ဆိုသည့် အနာဂတ် ပျောက်ဆုံးနေသူများ ဖြစ်သောကြောင့် အာဇာနည် အဖြစ် သေဆုံးသွားချင်ကြသည်။
ဦးမန်းဒါဝိတ်၏ အကြံပြုချက်ကို ယုံကြည် လေးစားစွာဖြင့် ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။
ဦးစွာပထမ ၀မ်းနုတ်ဆေးများ စားကြပြီး ၀မ်းစင်စင်သွားသည် အထိ ရေကိုသာ သောက်သုံးနေရသည်။ နောက်တနေ့ နံနက်တွင် ထောပတ် မရှိသည့်အတွက် စားအုန်းဆီကို ဆားအနည်းငယ် ခပ်၍ လက်ဖက်ရည် ဖန်ခွက်ငယ် တလုံး နီးပါးကို ရေသောက်သကဲ့သို့ မြိုချခဲ့ပြီး ကျနော် အပါအ၀င် သေဒဏ်ကျ အကျဉ်းသား သုံးဦးသည် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြရန် အဆင်သင့် ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
သို့နှင့် ကြိုးတိုက်သို့ လာရောက် ဝေငှသော နေ့လယ်စာ ထမင်း၊ ပဲဟင်း၊ ငါးပိ တို့ကို လက်မခံလိုကြောင်း၊ အကြောင်းမှာ အဆောင် ၃၊ ၄၊ ၅ မှ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြသူများနည်းတူ အစာငတ်ခံခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တိုက်ထောင်မှူး ဦးမင်းသူရွှေအုံး ကို ခေါ်ယူ အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
မေလ ၂၄ ရက်နေ့ နံနက် ကျနော်တို့၏ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြခြင်း တရက်ပြည့်သွားသည် အထိ မည်သည့် ထောင်အာဏာပိုင်ကမှ ကျနော်တို့ ၃ ဦးကို မေးမြန်းခြင်း မရှိဘဲ ထောင်ပုံစံ ထမင်းဟင်းများကို လာဝေပေးနေမြဲ ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့လည်း ဆက်လက် ငြင်းပယ်ဆဲဖြစ်သည်။ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြခြင်းကို အလှည့်ကျ ၀င်ရောက်ရန် အတွက်လည်း ကျန်သူများအားလုံးက ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် အဆင်သင့် ဖြစ်နေကြသည်။
ထိုညပိုင်းတွင် ကြိုးတိုက်တွင်းရှိ ကျန် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများနှင့် ကြိုးသမားများက မကျေနပ်ကြတော့ဘဲ ကမ္ဘာမကျေဘူး သီချင်းအပါအ၀င် နိုင်ငံရေး နိုးကြားတက်ကြွ သီချင်းများကို ထိုည တညလုံး သံပြိုင် သီဆိုခဲ့ကြသည်။
ည ၉ နာရီ တွင် အိပ်ချိန်သံချောင်း ခေါက်ပြီး အိပ်ချိန် ပေးခဲ့သော်လည်း ထောင်ဥပဒေ စည်းကမ်းကိုဆန့်ကျင်ပြီး နိုင်ငံရေးသီချင်းများက ကြိုးတိုက်တွင်းမှ ကျယ်လောင်စွာ ပျံ့နှံ့နေဆဲဖြစ်သည်။
သန်းခေါင်ကျော် နံနက် ၂ နာရီထိုးသည်အထိ ကြိုးတိုက်တွင်းမှ ဗိုလ်မှူးဟောင်း စာရေးဆရာ မောင်သော်က (NLD) လူ့ဘောင်သစ် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ကိုအောင်ဇေယျ၊ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိသားစုဆရာဝန်)၊ ပြည်သူ့ရဲဘော် ဗိုလ်အောင်နိုင်၊ စာရေးဆရာ ဒါရိုက်တာ ဦးမိုးသူ(NLD) စသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ၂ တို ဟုလည်း ခေါ်သည့် ကြိုးတိုက်အတိုရှိ လူ့ဘောင်သစ်ပါတီမှ ကိုမိုးဟိန်း၊ ကိုသန်းဇော်(NLD) စသည်တို့သည်လည်း အလှည့်ကျ နိုင်ငံရေးမိန့်ခွန်းများ ဟောပြောကြသည်။
မေလ ၂၅ ရက်နေ့ နံနက် ထောင်ဖွင့်ချိန် ရောက်သည့်အခါ ကြိုးတိုက်တံခါးများကို လာရောက် ဖွင့်ပေးခြင်း မရှိတော့ပေ။ နံနက်တိုင်း လုပ်နေကျ ဆီးခွက်၊ မိလ္လာခွက်များ ချရန်အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်နေကြသည်။
အခန်းတွင်း ဆီး၊ မစင်(မိလ္လာ) ခွက်များ ပြည့်လျှံနေသည့်အတွက် အခက်အခဲများ ပိုဖြစ်လာပြီး ကြိုးတိုက်ရှိ အကျဉ်းသား အားလုံး မကျေမနပ်ဖြစ်လာကြသည်။ ထိုစဉ်တွင် နံနက်စာကို ကြိုးတိုက်အတွင်းသို့ ယခင်ထက် စောစွာ လာရောက်ဝေငှသောအခါ တတိုက်လုံးက လုံးဝ လက်မခံကြောင်း ပြောဆို ပြန်လွှတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုစဉ်က ကြိုးတိုက်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအပါအ၀င် အကျဉ်းသား ၁၃၀ ခန့်ရှိသည်။
ငြိမ်းချမ်းစွာ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြရေးအတွက် ဆူပူအော်ဟစ်မှုများ ကို ရှောင်ကျဉ်ကြရန် ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများက ဟောပြောခဲ့ကြသည်။
“ငါတို့ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြရင် သူတို့က ရေပါ ဖြတ်လာမယ်၊ သူတို့ ဖြတ်တာကို ငါတော့ လက်မခံဘူး၊ ဒီတော့ ငါ့ ရေအိုး ငါရိုက်ခွဲမယ်”ဟု အရိုးကျည်းပေါင်းတက် ရောဂါ ခံစားနေရပြီး လမ်းလျှောက်ရ ခက်ခဲနေသည့် ဦးသော်က က အများ ကြားအောင် ပြောဆိုလိုက်သည်။
(ဦးသော်ကသည် ဆန္ဒပြပွဲပြီး များမကြာမီ ကြိုးတိုက် အခန်းနံပါတ် ၂၇ တွင်လဲကျ သေဆုံးသွားသည်။ သို့သော်လည်း အာဏာပိုင်တို့က သူ့ကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ ထုတ်သွားကာ ဆေးရုံကြီးတွင် သေဆုံးသည်ဟု သတင်း လွှင့်ခဲ့သည်။)
ကြိုးတိုက်တွင်းရှိ အကျဉ်းသားအများစုကလည်း မိမိတို့၏ အခန်းရှေ့မှ သောက်ရေအိုးများကို ဦးသော်က နည်းတူ ခွဲခဲ့ကြသည်။
ထိုအချိန်တွင် ကြိုးတိုက်၏ နောက်ကျောဘက်တွင် နံပါတ်တုတ်များ၊ လေးခွများ၊ ဂမ်းပိုက်(မီးသတ်ပိုက်တို) စသည်တို့ ကိုင်ဆောင်ထားသော ထောင်ဝန်ထမ်းများ၊ စစ်ခွေးများထံမှ အင်အားပြ ခြိမ်းခြောက်သံများ ထွက်ပေါ်လာသည်။
ထောင်အာဏာပိုင်များက မည်သို့မျှ အကြောင်းမပြန်ပေ။ ဖြိုခွဲမည့် လက္ခဏာများ မြင်တွေ့နေသည့် အတွက် အကျဉ်းသားတချို့က သည်းမခံနိုင်တော့ဘဲ ပုံစံပန်းကန်များကို တံခါးသံတိုင်တွင် ရိုက်ခတ်ကာ “အာဏာရှင်ကို တောခြောက် မောင်းထုတ်ကြ” ဟု အော်ဟစ်ကြသည်။
မူလ စီစဉ်ထားခဲ့သော ငြိမ်းချမ်းတိတ်ဆိတ်စွာ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြခြင်းအစား အော်ဟစ်ပြီး အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြသည့် အခြေ အနေ တခုဆီသို့ တွန်းပို့ခြင်း ခံလိုက်ကြရသည်။ တိုက် ၀န်းအတွင်းရှိ အခြားတိုက်များကလည်း ထောက်ခံသံများဖြင့် ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။
သို့နှင့် လူစာရင်း ပုံမှန် စစ်ခြင်းကို ထောင်ဝန်ထမ်းများက ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်ခြင်း မရှိတော့ဘဲ ကြိုးတိုက် ထိပ်နှစ်ဘက် သံတံခါးများကို ပိတ်ထားကြသည်။ ထောင်ပိတ် သံချောင်းခေါက်ခြင်းလည်း မပြုတော့ပေ။
ကြိုးတိုက် နောက်ဘက်တွင် ဆက်သွယ်ရေးစက်များ လာရောက်ထားသည်ကို တိုက်ခန်း ပြူတင်းပေါက်မှ တဆင့် တွေ့ကြရသည်။
ထို့နောက် တိုက်ဝန်းများမှ အော်ဟစ်တောင်းဆိုသံများ ဖုံးလွှမ်းသွားစေရေး၊ ရိုက်နှက် ညှဉ်းပန်းသံများ ပြင်ပမှ မကြားစေရေးတို့အတွက် ဟင်္သာတထွန်းရင်၏ “စာဥ”သီချင်းကို အင်းစိန်ထောင် ပင်မဘူးကြီးနှင့် ဘူးများ(ထောင် အုတ် ရိုး ပေါ်ရှိ လက်နက်ကိုင်အစောင့် များနှင့်ကင်းတဲများ) ပေါ်ရှိ အသံချဲ့စက်များဖြင့် ကျယ်လောင်စွာ ဖွင့်လေသည်။
အင်းစိန်ထောင် အထူးထောင်ပိုင် ဦးဘိုကြည်၊ ဒု- ညွှန်ချုပ် ဦးအုန်းဟန် အပါ အ၀င် စစ်ထောက်လှမ်းရေးတချို့က လမ်းလျှောက် စကားပြောစက်များ ကိုင်ဆောင်ကာ ကြိုးတိုက်ရှိ အခန်း တခုချင်းစီသို့ ချဉ်းကပ်လာသည်။ စစ်ဝတ်စုံ ၀တ်၂ ဦးနှင့် အရပ်ဝတ် စစ်ထောက်လှမ်းရေးများလည်း ပါဝင်သည်။ “မင်းတို့ တောင်းဆိုချင်တာပြောလေကွာ”ဟု ဆို သည်။
ခါးတွင် သေနတ်ချိတ်ထားသူ ဒုညွှန်ချုပ် ဦးအုန်းဟန်ကမူ ၁ တိုက်ရှိ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သည့် ကိုမင်းဇေယျာ အခန်းရှေ့ရပ်ပြီး ဘောင်းဘီဇစ်ကို ဆွဲချွတ်ကာ “မင်းတို့ လိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီတော့ မရဘူး၊ ဒါပဲရမယ်”ဟု ပြောခဲ့သည်။ ကြိုးတိုက်အခန်း တချို့ရှေ့တွင်လည်း အလားတူ ပြုမူခဲ့သည်။
မကြာခင်တွင် အင်းစိန်ထောင် ၀န်ထမ်းဦးရေ ၁၅၀ ခန့်၊ အကစ ရုံးချုပ်နှင့် သင်တန်းကျောင်းတွင် ရောက်နေသူ ၀န်ထမ်း များ စုစုပေါင်း ၃၀၀ ၀န်းကျင်တို့က ကြိုးတိုက်တွင်းသို့ ၀င်လာသည်။ လက်ကိုင်တုတ်များ၊ လေးခွများ၊ ခေါင်းစွပ်များ ကိုင်ထားကြသည်။
ကျနော်တို့ တယောက်ချင်းစီကို ခေါင်းစွပ်စွပ်ကာ လက်ထိပ် ခတ်ပြီး အခန်းတွင်းမှ စတင် ထုတ်သွားကြသည်။
အခန်းမှ စတင်ထုတ်ထုတ်ချင်း ထိုးကြိတ် ရိုက်နှက်မှုများ စတင်လေသည်။ မိုင်ဝက်နီးပါးရှိ မြေလမ်းအတိုင်း ထောင်ဘူးဝ နားရှိ အချုပ်ရုံး ရှိရာသို့ အတင်း ဆွဲခေါ်သွားကြသည်။ ထိုနေရာတွင် တဦးချင်းစီကို ထောက်ခြေကျင်းများ ခတ်လိုက်သည်။ ခေါင်းစွပ်ကို ဖြုတ်ပေးခြင်း မရှိပေ။ မိန်းဂျေးလ် အ၀ိုင်း ပတ်လည်တွင် မြေနီ ဂ၀ံခဲများပေါ် ၀မ်းလျားမှောက်ခိုင်းကာ လူအုပ်စုနှင့် အဆက်မပြတ် ရိုက်နှက်ကြသည်။
နောက်ပိုင်း ရိုက်ချက်များ နာကျင်မှု မဖြစ်တော့ဘဲ ထုံသွားသကဲ့သို့ ခံစားခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် ကျနော်တို့၏ အမည် နာမရှေ့တွင် “မ” တပ် ခေါ်ပြီး “ရှင်”ဟု ထူးခိုင်းသည်။ “မ xxxxx! ” ဟု ထောင်ဝန်ထမ်းက ခေါ်လျှင် “ရှိ”ဟု ဖြေရမည့် အစား မြန်မာအမျိုးသမီးများ ဖြေသကဲ့သို့ “ရှင်”ဟု ရိုက်နှက် ခေါ်ဆိုခိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကလည်း ယောက်ျားမာနကို ချိုးနှိမ်လို၍ လုပ်ဆောင်နေသည့် ထောင် ၀န်ထမ်းများ၏ လုပ်ရပ်ကို အံတုကာ “ရှိ” ဟုပင် ထူးကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဆက်လက် ရိုက်မြဲ ရိုက်နေခဲ့ကြသည်။
၀ိုင်းရိုက်နှက်နေစဉ် ထိုစဉ်က အင်းစိန်ထောင်ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာဦးစိုးကြည်က အကျဉ်းသားများ၏ ရင်ဘတ်ကို နားကြပ်ဖြင့် စမ်းပြီး “ မသေနိုင်သေးဘူး၊ ရိုက်လို့ရသေးတယ်”ဟု ပြောလေသည်။
ကျနော့်အနေဖြင့် မည်သို့မျှ ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်မှု မရှိသည့်နောက် ဉာဏ်ကူရန်အတွက် ချွေးဇောပျံအောင် စဉ်းစားပြီး နောက်ဆုံး အဖြေတခု ထွက်လာသည်။
“မ -------- ” ဟု ထောင်ဝန်ထမ်းက ရိုက်နှက် ထိုးကြိတ် ကန်ကျောက်ရင်း ခေါ်လိုက်သောအခါ မြန်မာအသံ “ရှိ” နှင့် “ရှင်”အကြား “ရှိန့်”ဟု ထူးလိုက်သောအခါ ကျောပြင်နှင့် ဦးခေါင်း အပါအ၀င် တကိုယ်လုံးပေါ်ကျနေသော ရိုက်ချက်များ ရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။
ထို့နောက် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြသူများ ၄၀၀ ခန့်ကို ပြင်းထန်စွာ ရိုက်နှက်ရင်း တချို့ကို စစ်ခွေးတိုက်သို့ ပို့လိုက်ကြသည်။ တချို့ကို တိုက်ဝန်းအတွင်းရှိ ကြိုးတိုက်နှင့် အခြားတိုက်များတွင် လူစုခွဲကာ ဆက်လက် ရိုက်နှက်ကြသည်။ ကျနော့်ကိုတော့ ကြိုးတိုက်အတိုရှိ အခန်းတခုသို့ ပြန်ခေါ်သွားသည်။
နောက်တနေ့ နံနက် စောစောတွင် ကျနော် အပါအ၀င် ကြိုးသမား ၂၀ တို့ကို ခေါင်းစွပ် စွပ်ပေးပြီး ရိုက်နှက်ကာ စစ်ခွေးတိုက်ရှိရာသို့ မိကျောင်းများတွား သွားရသည့်ပုံစံအတိုင်း စစ်ခွေးတိုက် ၁၀ ခန်းတွဲရှိ အခန်းနံပါတ် ၁၀ ရှိရာသို့ အရောက် သွားခိုင်းလေသည်။
စစ်ခွေးတိုက် တာဝန်ကျ တပ်ကြပ်ကြီး ဦးကံထွန်း ခေါ် ဗိုလ်ကံက “စစ်ခွေးတိုက် ၀င်ကြေး” ဟု အော်လိုက်သည်။ စစ်ခွေးတိုက်ဝန်းအတွင်း ဂ၀ံလမ်း တလျှောက် ၂ လက်မ အချင်းရှိ တုတ်ရှည် ဖြင့် တလမ်းလုံး ဆက်လက် ၀ိုင်းရိုက်ကြသည်။
စစ်ခွေးတိုက်ဟူသည်မှာ အကျဉ်းခန်း ၁၀ ခန်းရှိ တိုက် ဖြစ်ပြီး ည ကင်းပတ် စစ်ခွေးများကို ထိန်းကျောင်း သင်ကြားပေးသည့် နေရာ ဖြစ်သည်။ ခွေးသံများဖြင့် ဆူညံနေသည်။ စစ်ခွေးတိုက်တွင်း ရိုက်နှက် ညှဉ်းပန်းသံများကို ထောင်တွင်း မည်သည့်နေရာကမျှ မကြားနိုင်ပေ။
အခန်းတွင်းသို့ ရောက်သောအခါ စစ်ခွေးတိုက်ပုံစံ ထိုင်နည်းကို ရိုက်နှက်သင်ပေးသေးသည်။ စစ်ခွေးတိုက်၏ ပုံစံ ထိုင်နည်းမှာ တင်ပျဉ်ခွေကာ မျက်နှာ၊ ရင်ဘတ်ကို ကြမ်းပြင်နှင့် ကပ်နေစေပြီး လက်နှစ်ဘက်ကို ရှေ့သို့ ဆန့်ထုတ် ထားရသည်။
အခန်းတွင်း နံရံများတွင် သွေးနှင့်ရေးထားသော စာများကို ဖတ်ရင်း မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းက အခန်းတွင်း နေထိုင် သွားသူမှာ ကျနော့်အမှုတွဲ မြင့်ဆွေ ဖြစ်မှန်း သိလိုက်ရသည်။ (ကိုမြင့်ဆွေသည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်က သရက်ထောင်တွင် ထောင်အာဏာပိုင်များ၏ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် စိတ်ရောဂါသည် အချုပ်သားက တံပိုးဖြင့်ရိုက်သဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်) “ငါတို့တော်လှန်ရေး မပြီးသေးဘူး”ဟု သူ့ သွေးဖြင့် နံရံတွင် ရေးထားခဲ့သည်။
အားရအောင် ရိုက်နှက်ပြီးနောက် တာလပေါဟင်းရည်၊ ထမင်းပန်းကန်များ ကို သံတံခါးအောက်မှ ထိုးသွင်းလာပြီး “စား”ဟု ပြောသွားသည်။
ကျနော်က “မစားဘူး”ဟု ပြောလိုက်ပြီး ပုံစံထမင်းပန်ကန်ကို ပြန်ထုတ်ပေးလိုက်သည်။ သို့နှင့် တခါ ထုတ်ရိုက်ပြန်သည်။
အစာ မစားရသည်မှာ ၃ ရက်အတွင်း ရောက်လာခဲ့ပြီ။ တကိုယ်လုံး ဒဏ်ရာများနှင့်။ မှောက်အိပ်လို့လည်း မရ။ ပက်လက်အိပ်လို့လည်း မရ။ စောင်းအိပ်လို့လည်း မရ။ ထိုင်လို့လည်း မရ။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကလည်း တဖျစ်ဖျစ် မြည် သကဲ့သို့ စတင် ခံစားရသည်။
ဒဏ်ရာနာကျင်မှုများနှင့် ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုများ လုံးထွေး ခံစားရင်း တရက်ချင်း ကျော်ဖြတ်ကာ သေခြင်းအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန် သတိပဌာန်တရားဖြင့် ကြိုးစားရင်း နေခဲ့သည်။
အခန်းဖော်က အစာစားရန် အကြိမ်ကြိမ် နားချ တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ဗိုလ်ကံ (စစ်ခွေးတိုက် တာဝန်ခံ တပ်ကြပ်ကြီး) က ကျနော့်ကို အစာမစားသည့်အတွက် နံနက်တိုင်း စစ်ခွေးပုံစံထိုင်ခိုင်းကာ သစ်သားတုတ်ဖြင့် ရိုက်လေ့ရှိသည်။ သို့သော် ၅ ရက်မြောက်နေ့ နံနက် အိပ်ရာထချိန်မှ စတင်ပြီး လန်းဆန်းလာသကဲ့သို့ ခံစားလာရသည်။
ထိုနေ့တွင် ထောင်အာဏာပိုင်များက ရေအိုးတွင်းရှိ ရေကို ၂ ယောက်အတွက် ၁၅၀၀ စီစီ ခန့်သာ တရက်စာ ထားခဲ့ပြီး ကျန်သည့် ရေကို သွန်ပစ်လိုက်သည်။ အခန်းဖော် စိန်ဝင်း (၁၉၈၈ ခုနှစ် အရေးတော်ပုံ ကာလ အတွင်း မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်တွင် ရဲသတ်မှုဖြင့် သေဒဏ် ကျခံနေရသူ)က ထမင်းစားသည့်သူ ဖြစ်သည့် အတွက် ရေအများစုက ကျနော့်အတွက် ဖြစ်သွားသည်။
ထိုနေ့မှ စပြီး ရေသောက်ခြင်းမှာ အကန့်အသတ် ရှိလာသည်။ စစ်ခွေးတိုက် အခန်းကျဉ်းအတွင်း လမ်း လျှောက်ရာတွင်လည်း အနည်းငယ် မောစ ပြုလာခဲ့သည်။ ၁၀ ရက် ကျော်လာသောအခါ မျက်လုံးများေ၀၀ါးလာသည်။ ၁၅ ရက်မြောက်နေ့တွင် ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံး ပျော့အိလာကဲ့သို့ ခံစားလာရပြီး ကိုယ်ကိုထိန်းမတ်ရန် အခက်အခဲဖြစ်လာသည်။
မှတ်မိသည်မှာ ၁၁ ရက်ကျော်လာပြီးနောက်ပိုင်း ကျနော့်ကို လာမရိုက်တော့ပါ။ နားချစည်းရုံးမှု အကြိမ်ကြိမ်ကို စစ်ခွေးတိုက်ထဲရှိ ဘ၀တူ သေဒဏ်ကျအကျဉ်းသားများမှတဆင့် ဆက်လုပ်ခဲ့သည်။ ထောင်ဆရာဝန် ဒေါက်တာထွန်းထွန်းကလည်း နောက်ပိုင်းရက်များတွင် မကြာခဏ လာကြည့်ခဲ့ပြီး အစာစားရန် ဖျောင်းဖျ တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
၁၇ ရက်မြောက်သည့်နေ့အထိ အသိ ရှိနေသော်လည်း ခန္ဓာကိုယ်မှာ သယ်ယူရန် ခက်ခဲလာသည်။ သေခြင်းအတွက် ဗုဒ္ဓအဆုံးအမအတိုင်း သတိဖြင့် သေရန်၊ လူပီသစွာ သေရန် ကြိုးစားရင်း အသက်ရှင်စိတ်ကို လုံးဝ မစွန့်လွှတ်ခဲ့ပေ။
သတိရလိုက်စဉ်မှာ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြသည့် ၁၈ ရက်မြောက်နေ့ (နောက်ပိုင်းမှ ပြန်လည်ရေတွက်၍ သိရခြင်းဖြစ်သည်) တွင် ကျနော့် တကိုယ်လုံး ပေ့ါပါး လန်းဆန်းနေသည်။ လေထဲတွင် လွင့်မျောနေသကဲ့သို့ ခံစားနေရသည်။ အာကာသတွင်း ရောက်သည်မျိုး ဖြစ်မည် ထင်သည်။
အနီးတွင် ထောင်အာဏာပိုင်များကို မတွေ့ရပေ။ ကျနော့် မျက်ဝန်းတွင် ထောင်ဆရာဝန် ဒေါက်တာထွန်းထွန်းကို တွေ့ လိုက်ရသည်။ ကျနော့်လက်တွင် စစ်ခွေးတိုက် အခန်း ၁၀ ၏ တံခါး သံတိုင်တွင် ဂလူးကိုစ့် ပုလင်းကြီး ချိတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အခန်းဖော်က ပြုံးယောင်သန်းနှုတ်ဆက်သည်ကို တွေ့နေရသည်။
“အစ်ကို မသေပါဘူး၊ သေမှာ မကြောက်သူကို သေမင်းက မခေါ်ဘူးဗျ”ဟု အခန်းဖော် ကိုစိန်ဝင်းက အားပါးတရပြောသည်။
“အစ်ကို့စကားအတိုင်း ကျနော် အကြံပေးချင်တယ်။ တော်လှန်ရေးက အတော်ကြာဦးမယ်။ ငါတို့ အသက်ရှင်သန် နေခြင်းသည်ပင် သူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း မဖြစ်အောင် တော်လှန်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ အစ်ကို ပြောထားတာပဲ။ ကိုယ့်စကားနဲ့ အညီ ကိုယ်တိုင် ကျင့်သုံးသင့်တယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောလာသည်။
သေချာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပြီး ယခု ဆက်လက် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေခြင်းသည် မိမိအတွက် ဘာအကျိုးရှိမည်လဲ ဆိုသည်ကို အဖန်ဖန် ဆန်းစစ်ကြည့်မိသည်။
သို့သော် တောင်းဆိုချက်များကို ယခုထိ မည်သို့မျှ တုံ့ပြန်ခြင်း မရှိသေးသည့်အတွက် စစ်ခွေးတိုက် တာဝန်ခံနှင့် တွေ့လိုကြောင်း တာဝန်ကျ ထောင်ဝန်ထမ်းတဦးမှ တဆင့် ပြောဆိုခဲ့သည်။
မကြာခင် ဗိုလ်ကံ နှင့် နောက်တဦး ရောက်လာသည်။ ထိုသူက အကျဉ်းဦးစီး ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသော စစ်ထောက်လှမ်းရေး တပ်ကြပ်ကြီး လှမြင့် ဖြစ်ကြောင်း နောင်မှ သိရသည်။ သူ့လက်ထဲတွင် ခေါက်ဆွဲကြော်တထုပ်နှင့် နွားနို့ပုလင်း ကိုင်ထားသည်။ ကျနော့်ကို ပါလာသည့်အစား အသောက်များစားရန်တိုက်တွန်းပြီး ဆက်လက် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြသူ မရှိ ဟူ၍ အထက်ကို သတင်းပို့ထားကြောင်း ပြောဆိုပြီး ထွက်သွားကြသည်။
ကျနော် ဘာဆက်လုပ်မည်နည်း။ မေးခွန်းပေါင်းများစွာက ကျနော့်ခေါင်းထဲ ဆူညံနေသည်။ ဂလူးကိုစ့်ပုလင်းကြီး အရှိန်ဖြင့် လန်းဆန်းနေသော်လည်း စိတ်ထဲတွင် “ဟာ” နေသည်။
ထိုစဉ်က ချခဲ့သော ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ကျနော် ယခု စာရေးနေနိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောရမည်။
ခေါက်ဆွဲကြော်တလုပ် စားတိုင်း၊ နွားနို့ တငုံ သောက်တိုင်း ကျနော် မျက်ရည်ပေါက်ပေါက် ကျခဲ့ရသည်။ အရှုံးအတွက် ကျခဲ့ရသော ယောက်ျားမျက်ရည်ပင် ဖြစ်သည်။
လူသားတိုင်း အောင်မြင်ခြင်းတွေ ရင်ဆိုင်ရသလို အရှုံးနှင့်လည်း ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်မှာ ဓမ္မတာဖြစ်သည်။
အာဏာရှင်လက်အောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြပွဲများထဲမှ ထင်ရှားသည့် အောင်ပွဲတခုမှာ တပါတီ အာဏာ ရှင် ဦးနေ၀င်း လက်ထက် ကိုကိုးကျွန်း အကျဉ်းစခန်းရောက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏ အသက် ၈ ချောင်းဖြင့် လဲလှယ် ခဲ့ရသော ကျွန်းစံနစ် ဖျက်သိမ်းပေးရေး တိုက်ပွဲပင် ဖြစ်သည်။
၁၉၉၈ ခုနှစ် မေလက တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သော သာယာဝတီ အကျဉ်းထောင်တွင်းရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများက အခြား အကျဉ်းသားများနည်းတူ ထောင်လက်စွဲ ဥပဒေအရ လျှော့ရက် ခံစားခွင့် အတွက် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြပွဲတွင် ကိုအောင်ကျော်မိုး အသက် ပေးဆပ်ခဲ့ရသည်။
ယခုလည်း အင်းစိန်ထောင်တွင်းက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ စစ်ခွေးတိုက်ပို့ပြီး လူစုခွဲ ဖြိုခွင်းခံနေရချိန်တွင် သူတို့ ဘယ်လို ခံစားနေရမည် ဆိုသည်ကိုနားလည်ခံစားရင်း အဆိုပါ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၊ အကျဉ်းသူများအတွက် လွန်စွာ စိုးရိမ် ပူပန်နေမိသည်။
ယခု ရေးသားခဲ့သော အတွေ့အကြုံများကို အများ သိစေရန် ဆိုသည့် စေတနာဖြင့်သာ ဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ခံစားခဲ့ရသော အိပ်မက်ဆိုးများအကြောင်း စိုးစဉ်းမျှ မတွေးချင်တော့ပါ။
စာရေးသူ လင်းသန့်သည် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် သေဒဏ်ကျခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သေဒဏ်မှ တသက်တကျွန်းသို့ ပြောင်းလဲကျခံခဲ့ရပြီး ထောင်တွင်း၌ အနှစ် ၂၀ နီးပါး ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တဦးဖြစ်သည်။
Burma Today News Update (May 31, 2011)
Burma Today photo news updates and article update are as follows:
The Depayin Massacre Anniversary Event in Seoul, South Korea (Photo News)
ဆိုးလ်မြို့ မြန်မာစစ်သံရုံးရှေ့က မေ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်မှုကြီး နှစ်ပတ်လည်နေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (ဇော်မိုးအောင်)
Burmese Thingyan Celebration @ Dhamma Viman Monastery, High Point, North Carolina, USA (Photo Essay)
မြောက် ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ် ဓမ္မဗိမာန်ကျောင်းတိုက်တွင် ကျင်းပတဲ့ မြန်မာ့သင်္ကြန်ပွဲ (ပြည်သူ့သတင်းထောက်)
The Depayin Massacre Anniversary Event in Tokyo, Japan (Photo News)
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ပြုလုပ်တဲ့ ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှု နှစ်ပတ်လည် ဆန္ဒပြပွဲ (မင်းညိုဝမ်း)
Depayin Massacre Anniversary Event @ Zetawon Monastery in Fort Wayne, Indiana, USA (Photo News)
ဖို့တ်ဝိန်းမြို့ ဇေတ၀န်ကျောင်းတိုက်တွင် ကျင်းပတဲ့ ဒီပဲယင်းလူသတ်ပွဲ ရှစ်နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် ဆွမ်းကပ်လှူပွဲ (ခင်မောင်လေး)
Korean Taekwando Group Performs in Rangoon (Photo News)
ရန်ကုန် အမျိုးသားဇာတ်ရုံတွင် ဖျော်ဖြေတဲ့ ကိုရီးယား တိုက်ကွမ်ဒိုအဖွဲ့ (ကိုရီးယား အွန်လိုင်းသတင်းစာ မှ)
Red Rock State Park, Arizona, USA (Photo Essay)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အာရီဇိုးနားက ရက်ဒ် ရော့ခ် (Red Rock) ပြည်နယ် ပန်းခြံ (ရွှေ မန္တလာ)
Summer Course Graduation Event @ Mother's Home Education Camp (Photo News)
အမေ့အိမ် စာသင်ကျောင်း နွေရာသီသင်တန်းဆင်းပွဲ (ပြည်သူ့သတင်းထောက်)
Burma Forum in Seoul, Korea (Photo News)
ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပတဲ့ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးပွဲ (စောထွန်းထွန်း (ကေ၀ိုင်အို - ကိုရီးယား))
Free Burmese Political Prisoners Campaign in Korea (Photo News)
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဂွာန်ဂျူက ဈေးရောင်းပွဲတော်နဲ့ မြန်မာ့အရေး လက်မှတ်ထိုး လှုပ်ရှားမှု (ဇော်မိုးအောင်)
Korean Premiere Screening of This Prison Where I Live (Photo News)
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ပြသတဲ့ ဇာဂနာ့အကြောင်း ရုပ်ရှင်ပွဲ (စောထွန်းထွန်း (ကေ၀ိုင်အို - ကိုရီးယား))
၁၀၈ စစ်ဒေသ သို့ (ဖိုးသံ (လူထု))
ထာဝရ ရန်သူ၊ ထာဝရ မိတ်ဆွေ၊ ထာဝရ အကျိုးစီးပွားနဲ့ ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ အရေး (တူမောင်ညို)
30 May 2011 Yeyintnge's Diary.doc
2324K View Download
30 May 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
2425K View Download
30 May 2011 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/30/20110အကြံပြုခြင်း
ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ် နှစ် ၁၀၀ ပြည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပေးပို့တဲ့ ဗွီဒီယို
Aung San Suu Kyi Speech at HKU 2011.mp4
2307K Play Download
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အတွင်း အနှောင့်အယှက်ပေးခဲ့ကြသည့် လက်နက်ကိုင်လူတစုကို ဒီပဲယင်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု မဖြစ်ပွားမီ ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ကျည်တောက်ပေါက် ကျေးရွာအနီးတွင် ၂၀ဝ၃ ခုနှစ် မေလ ၂၅ ရက်နေ့က တွေ့မြင်ရသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။(Photo: Ad Hoc Commission on Depayin Massacre- Burma)
သံတမန်ဟောင်း တဦးလည်း ဖြစ်၊ စစ်ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိဟောင်းလည်း ဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်လင်းထွဋ်ကို ဦးတင်အောင်ခိုင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ဘယ်သူ့မှာ တာဝန် အရှိဆုံးလဲ by yeyint2011
တရုတ်မှ ဒေါ်လာ ၇၆၃ သန်း ထုတ်ချေး
တရုတ်မှ ဒေါ်လာ ၇၆၃ သန်း ထုတ်ချေးမည်ဆိုသော်လည်း စီမံကိန်း၏ အဓိက ပင်မ ဒေသ အကျိုးခံစား ရနိုင်ဖွယ် မရှိ
မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ သုံးရက်တာ တရုတ်ပြည် ခရီးစဉ်အတွင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား ရထားလမ်း တည်ဆောက်ရေး အပါအ၀င် တခြား အကျိုးတူ စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းများ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး၊ ထိုလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖေါ်ရန် အတွက် တရုတ်မှ မြန်မာကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၇၆၃ သန်း ထုတ်ချေးလိုက်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
တရုတ်နှင့် ရထားလမ်း ဆက်သွယ်မည့် ကျောက်ဖြူမြို့
ဦးသိန်းစိန်၏ တရုတ် ခရီးစဉ် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူဆိပ်ကမ်းမှ အရှေ့ဘက်နယ်စပ်မြို့ မူဆယ်ကို ဖြတ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ရူလီအထိ ကီလိုမီတာ ၈၁၀ ရှည်လျားသည့် ရထားလမ်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ရထားလမ်း တည်ဆောက်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် China Railway Group Limited မှ မြန်မာသမ္မတ၏ ခရီးစဉ် အဆုံးသတ်ခဲ့သည့် ယမန်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
မြန်မာသမ္မတ၏ ခရီးစဉ်အတွင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် သဘောတူညီချက်အတိုင်း ၄င်း ကျောက်ဖြူ-မူဆယ်-ရူလီ ရထားလမ်းကို အဆိုပါ တရုတ်ရထားလမ်းတည်ဆောက်ရေးကုမ္ပဏီမှ တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
၃ နှစ်အတွင်းအပြီးသတ်တည်ဆောက်ရန်စီစဉ်ထားသည့် အဆိုပါရထားလမ်းဖြင့် မြန်မာနှင့် တရုတ်တို့ အကြား အကျိုးတူ စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်လာနိုင်မည်သာမက မြန်မာ၏ ဒေသတွင်း စီးပွါးရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကိုလည်း အထောက်ကူ ဖြစ်လာစေလိမ့်မည် ဟုလည်း တရုတ် အစိုးရ မီဒီယာများမှ သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။
သို့သော်လည်း ထိုင်း အခြေစိုက် ရွှေဂတ်စ် လူပ်ရှားမူ တာဝန်ခံ ဦးဝင်းအောင်က တရုတ်မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်သော စီမံကိန်းများ ဒေသခံ ပြည်သူများအတွက် အကျိုးတစုံတရာ ရှိသည်ကို ယခုထက်တိုင် မမြင်တွေ့ ရသေးကြောင်း သူက ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
" ပြောရမယ်ဆိုရင် ရခိုင် ဒေသမှာ ဒီဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းတွေကို လုပ်ဆောင် နေတာဟာ နှစ်ပေါင်း သုံးလေး နှစ်သက်တမ်းရှည်လာပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ခုချိန်အထိ ရခိုင်ပြည်သူ လူထုအတွက် ဘာတစ်ခုမှ အကျိုး မရှိသေးဘူး။ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးတာလည်း ခုချိန်ထိ ဘာမှ မတွေ့ရသေးဘူး။ အဲဒီ စီမံကိန်းကြောင့်သာ မြေတွေ သိမ်းခံရတာတွေ၊ မိမိရိုးရာ အစဉ် အလာအရ လုပ်ကိုင် စားသောက်နေတဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေသာ ဒေသခံတွေ ဆုံးရှုံး သွာတာကို ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ ဒီအတွက် ခုလုပ်မယ့် စီမံကိန်းတွေဟာ ဒေသခံ ရခိုင်ပြည်သူလူထုအ တွက်အကျိုးရှိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ ခုလုပ်နေတာတွေဟာ သူတို့ အစိုးရ နှစ်ရပ်ရဲ့ အကျိုး စီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုကို အဓိကထား လုပ်ဆောင် နေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်" ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာ အစိုးရသည် ရခိုင် ဒေသမှ သဘာဝ သံယာဇာတ ပစ္စည်းများကို ထုတ်ယုပြီး အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများသို့ ရောင်းချရန်သာ စိတ်ဝင်စားနေပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမူ လုံးဝ လစ်လျူရှု့ ထားကြောင်း ပြည်တွင်း ပြည်ပတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ြ့ပန့် ဝေဖန်မူများ ထွက်ပေါ်နေသည်။
တရုတ်သင်္ဘောများ ဆိပ်ကပ်ရန် ကျောက်ဖြူ အမှတ်(၁) ဖေါင်တော်ကို ယခုအခါ ပြန်လည် တည်ဆောက်နေသည်။ ( ဓါတ်ပုံ- နိရဉ္စရာ)
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင်ရှိ ရွှေဓါတ်ငွေ့သိုက်မှ ထုတ်လုပ်မည့် သဘာဓါတ်ငွေ့ နှင့် အတူ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများမှ သင်္ဘောများဖြင့် တင်သွင်းလာမည့် ရေနံစိမ်းများကို လက်ခံနိုင်ရန် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အတွင်းတွင် တရုတ်မှ ဆိပ်ကမ်းများ နှင့်အတူ ပိုက်လိုင်းများကို အကောင်အထည်ဖေါ် တည်ဆောက်လျှက် ရှိသည်။
" လက်ရှိ ဂတ်စ်နဲ့ ရေနံ ပိုက်လိုင်း တည်ဆောက်နေမှုနဲ့ ရထားလမ်း စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိ အစိုးရက ရခိုင် ပြည်သူ လူထုရဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေကို မလုပ်ဆောင်ပေးရင်တော့ ဒီစီမံကိန်း တွေဟာ အပြောအရဘဲ လူထု တွေအတွက် အကျိုးရှိနိုင်မယ်လို့ ပြောနိုင်ပြီး လက်တွေ့မှာ ဒီလုပ်ငန်း တွေဟာ ရခိုင်ပြည်သူလူထု အတွက် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ အကျိုးရှိလာနိုင် မဟုတ်ပါဘူး" ဟု ကိုဝင်းအောင်က ပြောသည်။
ဦးသိန်းစိန်၏ ခရီးစဉ်အဆုံးတွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည့် မြန်မာအစိုးရပိုင် သတင်းစာများ၏အဆိုရ ၄င်းပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းများ နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စီမံကိန်းများအပါအ၀င် တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီမံကိန်း ၇၂ ခုတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅.၈ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားကြောင်း သိရှိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံတစ်ခု အဖြစ် ဖေါ်ပြထားပြီး၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှု ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅.၃ ဘီလီယံရှိခဲ့ပြီး၊ ယခု ၂၀၁၁-၂၀၁၂ တွင် ကုန်သွယ်မှု ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ဘီလီယံအထိ တိုးတက် လာမည် ဟု မျှော်လင့် ထားကြောင်းလည်း ၄င်းမြန်မာ့ သတင်းစာများတွင် ရေးသား ဖေါ်ပြကြသည်။
သို့သော်လည်း တရုတ်၏ စီးပွါးရေး ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒေသခံပြည်သူများ နစ်နာ ဆုံးရှုံး နေကြရကြောင်းနှင့် တရုတ်၏ ဆိပ်ကမ်း၊ ပိုက်လိုင်းများနှင့် လမ်းပမ်း ဆက်သွယ်ရေး စီမံကိန်းများကို စတင် အကောင် အထည်ဖော် တည်ဆောက်နေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဒေသခံများက ပြောသည်။
"ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အထူးသဖြင့် ဒီရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်ပြီးတော့ တရုတ်အ ပါအ၀င်နိုင်ငံ တကာက ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားတာတွေ အများအပြားတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ရင်းနှီး မြှပ်နှံမှုတွေကြောင့် ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက် ဘာမှ အကျိုးရှိလာတာကို ခုချိန်ထိ မတွေ့ ရသေးဘူး။ အဲဒီ စီမံကိန်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေကြောင့် ဒေသခံ ပြည်သူတွေ လုပ်စားမဲ့ ကိုင်စားမဲ့ ဘ၀ပျက်နေကြရတာကိုပဲ တွေ့မြင်နေရပါတယ်" ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
၎င်းပြင် တရုတ်ကုမ္ပဏီများမှာ အဆိုပါစီမံကိန်းများ တည်ဆောက်ရာတွင် သာမန် အလုပ်သမားများကိုပင် တရုတ်ပြည်မှ ယူဆောင်လာခဲ့ပြီး၊ ဒေသခံများကို ခန့်အပ်ပေးခြင်း မရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
တရုတ်၊ အိန္ဒိယ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီများမှ မြန်မာအစိုးရနှင့် ပေါင်းဖက်ပြီး ရခိုင်ဒေသအတွင်း အပြိုင်အဆိုင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံနေကြပြီး စီးပွါးရေး စီမံကိန်း အများအပြားကို အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင် နေကြသော်လည်း ဒေသခံ ရခိုင်ပြည်သူ အများစုမှာ အဆိုပါ စီမံကိန်းများမှ တစ်စုံတရာ အကျိုးခံစားခွင့်မရသဖြင့် တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ စီးပွားရေး ကျပ်တည်းမူနှင့် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမူ ပြဿနာများကိုသာ ရင်ဆိုင်နေကြရပြီး လက်ရှိ အချိန်တွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလန်း အတွက် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဗမာပြည်မနှင့် ကချင်ဒေသအပါအတွင် ထိုင်း၊ မလေးရှားစသည့် နိုင်ငံများသို့ နေ့စဉ် ရက်ဆက် ထွက်ခွာနေကြရသည်။
By ဦးသန်းလွင်ထွန်း တနင်္ဂနွေ, 29 မေ 2011
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ သမ္မတသစ် ဦးသိန်းစိန်ရဲ့  တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်ဟာ အရပ်သားအမည်ခံ မြန်မာအစိုးရသစ် အနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လုံခြုံရေး အစစအရာရာ မှီခိုအားထားပါတယ်ဆိုတဲ့ မပြောင်းလဲတဲ့ နိုင်ငံရေးခြားရေး မူဝါဒကို ပြသလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲလို့ လေ့လာသူတွေက ရှုမြင်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ မှာရှိနေတဲ့ မြန်မာ့အရေးလေ့လာသူ ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ။ ။ ဗမာနိုင်ငံဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့  ရေရှည်ပေါ်လစီရဲ့  အရေးပါတဲ့နေရာမှာ ပါပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒါကို သူတို့အကောင်အထည်ဖော်တာပဲ။ အဲဒါ ကျနော် ဘာကိုဆိုလိုတာလည်းဆိုရင် အမေရိကန် စူပါ ပါဝါအနေနဲ့ အာဏာရှိလာချိန်မှာ အမေရိကန်အလယ်ပိုင်းနဲ့ တောင်အမေရိကဟာ ငါရဲ့  ရပ်ကွက်ပဲလို့ ကြေညာပြီးတော့ ဒီဟာကို သူတို့ မောင်ပိုင်စီးတယ်။ သဘောက သူတို့ရဲ့  အာဏာကို သူတို့ထုတ်ပြတာပေါ့။ တရုတ်ကလည်း အခုအခါမှာ ကြည့်လို့ရှိရင် စီးပွားရေးအရ ဒုတိယဖြစ်လာပြီ။ စစ်ရေးအရလည်း ဒုတိယ ဖြစ်လာပြီ။ အဲဒီလို ရှိလာတဲ့အခြေအနေတွေကို တိုးချဲ့ တာပေ့ါ။ သူတို့ရဲ့  အာဏာကို ပြတာပေါ့။ အဲဒီလို့ ပြတဲ့အချိန်မှာ တရုတ်က ဘာရူးလာလည်းဆိုတော့ အမေရိကန်က သူတို့ကို ဝိုင်းမှာကြောက်တော့ တရုတ်က ဘာလုပ်လာလည်းဆိုတော့ သူ့ကိုယ်သူ ဝိုင်းလိုက်ပြီး ဒီဟာက ငါရဲ့  ပိုင်နက်ပဲဆိုပြီး ကြေညာလာတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ပြောတာက တရုတ်ဘက်က အမြင်ကိုပြောတာ။ ဒါပေမဲ့ ဗမာနိုင်ငံ ဘက်က ကြည့်မယ်ဆိုရင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့  အစိုးရက မကြာသေးခင်ကမှ အသစ်တက်လာတဲ့ အစိုးရ။ အသစ်တက်လာတဲ့ အစိုးရ သမ္မတသစ်တယောက်အနေနဲ့ ပထမဦးဆုံးသွားတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြား ခရီးစဉ်က အိမ်နီးချင်း တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်နေတော့ ဒါက ထူးခြားချက်။ အစိုးရသစ်ရဲ့  မူဝါဒသဘောထားကို ဖော်ပြလိုက်တဲ့ ထူးခြားချက်အနေနဲ့ မယူဆနိုင်ဘူးလား။
ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ။ ။ သိပ်သေချာတာပေါ့။ အစိုးရသစ် တက်လာတဲ့အခါမှာ အစိုးရကို ထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံ၊ သူတို့က archor ခေါ်တာပေါ့ - သူတို့ ကျောက်ချရမယ့် နိုင်ငံဟာ တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ တရုတ်ကို အားကိုးတဲ့ ဟာကို ဆက်ပြီးယူထားတာပေါ့။ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်ကလည်း အမေရိကန်ပေါ်လစီက မပြောင်းဘူးဘဲ ပြောကြပါစို့။ တရုတ်ကလည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဆိုရင် သမ္မတအသစ် ဖြစ်မယ်။ သူ့ရဲ့  ရပ်တည်ချက်ကို အားကိုးတဲ့ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တရုတ်ကိုအားကိုးတယ်ဆိုတာ။ ပထမဦးဆုံး သွားတဲ့နိုင်ငံက ထူးခြားတယ်ဆိုတာ အားကိုးတာကိုပြတာ။ ထိုနည်းတူစွာ ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းမှာ ဘယ်သူက အသိအမှတ်အစပြုပြီးတော့ လာပြီးတော့ စစ်ဖက်ရေးရာ၊ အကုန်လုံးလာတာ ဘယ်သူလည်းဆိုရင် တရုတ်ပဲ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒီတော့ ဒါက အဓိကအားဖြင့်တော့ နိုင်ငံရေး ပထဝီအနေအထားအရလည်း ပါတယ်။ ဗမာအစိုးရအနေနဲ့ အနောက်အုပ်စုရဲ့  ဝိုင်းကြဉ်မှုတွေကို ခံနေရတဲ့အချိန်မှာ တရုတ်ကို ပိုပြီး အားထားလာတယ်။ ဒီအနေအထား၊ ဒီသဘောထားဟာ အစိုးရသစ် တက်လာတော့လည်း မပြောင်းပါဘူးဆိုတဲ့ သဘောကို ပြချင်တာပေါ့။
ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ။ ။ ဒါ သေချာတာပေါ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နှစ်ခု ရှိတယ်။ ဗမာနိုင်ငံအနေနဲ့ သူတို့အနေနဲ့ ကစားနိုင်တဲ့ အကွက်ရှိဖို့ရာ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံပေါ့။ ဆိုတော့ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ နိုင်ငံရေးအရဆိုရင်တော့ တရုတ်ကိုပဲ အားကိုးရတာ မကောင်းဘူး။ ကျနော်လည်း ဗမာနိုင်ငံသားအနေနဲ့ မကြိုက်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီအတိုင်း ဆက်သွားလို့ရှိရင် ကျနော်တို့က လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ပေမဲ့ Yunnan Province မျိုး ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ ဗမာအစိုးရအနေနဲ့လည်း ကစားကွက် သိပ်မရှိဘူး။ မရှိတဲ့အတွက် ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကို လက်ခံဖို့အတွက်ကို တရုတ်ကို ပြေးကပ်တာပဲ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အခုနက ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ပြောတဲ့အထဲမှာ စီးပွားရေးကျွန်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတခု ပါပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အများဆုံးနိုင်ငံ။ အထူးသဖြင့် တနှစ်ကို ဒေါ်လာ ၁၅ ဘီလီယန်ကျော်ကျော် ရင်းနှီးမြုပ်နှံနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျနော်တို့ သိရပါတယ်။ အခုလို နိုင်ငံတကာက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပိတ်ဆို့နေတဲ့ကြားထဲမှာ တရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကို အားမကိုးနိုင်ဘူး ဆိုရင် ဗမာနိုင်ငံအနေနဲ့ တခြားဘာတွေလုပ်လို ရမလဲ။
ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ။ ။ ဗမာနိုင်ငံအနေနဲ့ ကစားကွက်ကတော့ အနောက်နိုင်ငံ နဲ့ တရုတ်ကို ပြန်မျှပြီး ကစားလို့ ရတာပေါ့။ အခုတော့ ဥရောပကလည်း ပျော့ပျောင်းလာတယ်။ ဥရောပက ဆက်ဆံချင်တာ ရှိပေမယ့်။ အမေရိကန်ရဲ့  ပေါ်လစီ မပြောင်းဘူး။ ဆိုတော့ ဘာလာဖြစ်သလဲဆိုတော့ အခုန စီးပွားရေးကျွန် ဖြစ်တယ်ဆိုတာက တရုတ်ကလည်း အာဆီယံနဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ တရုတ်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကို အာဆီယံက ပိတ်သလောက်ပိတ်ထားတာရှိတယ်။ ဆိုတော့ ဗမာနိုင်ငံမှာထုတ်တဲ့ တရုတ် ရင်းနှီးမှု၊ တရုတ်အတတ်ပညာ အားလုံးနဲ့ တရုတ်ထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းပဲ ဗမာနိုင်ငံမှာ ထုတ်တာပဲရှိတယ်။ ဗမာနိုင်ငံဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့  ပြည်နယ်တခု။ စီးပွားရေးပြည်နယ်တခုလိုသာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအခါကြတော့ အာဆီယံနဲ့ ဆက်လိုက်တဲ့အခါ ကျတော့ တရုတ်ရဲ့  ပစ္စည်းတွေဟာ အာဆီယံကို ပြန့်သွားတယ်။ ဒီအကွက်ကို တရုတ်က နင်းလာသလို ကျနော်တို့ ဗမာနိုင်ငံအနေနဲ့ တရုတ်ကလွဲပြီးတော့ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ကစားဖို့အကွက် မရှိဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့ စီးပွားရေးကျွန်ဖြစ်မယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒါအပြင် စောစောက ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ပြောတဲ့အထဲမှာ တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ သူ့ရဲ့  အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို သူဘာသာ ဝိုင်းရံပတ်လိုက်ပြီးတော့ ဒါဟာ ငါတို့လူတွေပါလို့ သူ့ရဲ့  ဘောင်အတွင်းကို ဆွဲသွင်းလိုက်ပြီး နိုင်ငံရေးအယူဝါဒ နဲ့ လုံခြုံရေးအရ အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး ဆွဲသွင်းလိုက်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့် ဘယ်လိုမျိုး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်မလဲ။
ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ။ ။ တရုတ်အနေနဲ့ အများကြီး ရနိုင်တာပေါ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့။ နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ တရုတ်က အရေးကြီးဆုံးက တကယ်လို့ စစ်ဖြစ်လို့ရှိရင် ရေနံပြဿနာရှိတယ်။ ဆိုတော့ သူက ဘာလုပ်လိုက်သလဲဆိုရင် ဗမာနိုင်ငံကို အမေရိကမှာ Louisiana, Texas လိုပဲ သင်္ဘောတွေအားလုံးဟာ ဒါကြောင့် စစ်တွေကို ရေနက်ဆိပ်ကမ်းလုပ်လိုက်တယ်။ တခါ ရခိုင်ကနေ ယူနန်ကို တန်သယ်မှာ။ ဆိုတော့ ဗမာနိုင်ငံဟာ တရုတ်နိုင်ငံကို ပိတ်နေတဲ့ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့  ထွက်ပေါက်ကို ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ ဒီအတွက် စစ်ရေးအရကော၊ စွမ်းအင်လုံခြုံရေးအရကော၊ စီးပွားရေးအရကော ဗမာနိုင်ငံဟာ ပထဝီ အနေအထားအရ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ အနေအထားမှာရှိနေတယ်။ တရုတ်က ဗမာနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့ တိုးချဲ့ ပြီးတော့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တရုတ်အတွက် အင်မတန် အကျိုးရှိပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒီတော့ ဒီအကျိုးတွေပဲ ကြည့်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံတကာက ဝေဖန်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ၊ နိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုတွေကို တရုတ်က မဝေဖန်တော့ဘူးလို့ ယတိပြတ် ယူဆလို့ ရနိုင်သလား။ ဒါမှမဟုတ် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဝေဖန်မှုတွေ ရှိနေသလား။
ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ။ ။ တရုတ်ကတော့ လုံးဝ မဝေဖန်ဘူးရယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ တရုတ်က ရှင်းနေတာ ကတော့ သူ့နိုင်ငံအကျိုးအတွက်တော့ သူကစားမှာပဲ။ ဗမာနိုင်ငံတွင်းမကဘူး တကမ္ဘာလုံး ဆူဒန်၊ အာဖရိက က နိုက်ဂျီးရီးယားတို့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေအားလုံးကို တရုတ်က ဆက်ဆံမှာပဲ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ရေနံ။ အမေရိကန်က ရေနံကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတဲ့အတွက် ကျန်တဲ့ ဟာတွေအားလုံးကို တရုတ်က လိုက်ဆွဲတာ။ တရုတ်ကတော့ သူ့နိုင်ငံအကျိုးကတော့ ပထမပဲ။ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ဘာတွေဆိုတာက နောက်မှလာတာ။ သို့သော် နိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံ ဖြစ်လာမှ သူ့မှာ တာဝန်ရှိတဲ့အတွက် သူကြည့်ကောင်းအောင်တော့ သူလုပ်မယ်။ သို့သော် အဓိကကျတဲ့ တရုတ်အကျိုးအတွက်ကတော့ အဓိကပဲလို့ အဲဒီလိုမြင်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ နိုင်ငံတကာဆိုလို့ နိုင်ငံတကာမှာ ဝိုင်းပြီးတော့ နိုင်ငံတကာကနေ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့၊ အပြစ်တင်ခံနေရတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့  ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကို သွားချင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲ ပြောရမလား မသိဘူး။ လောလောဆယ် တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့  သမ္မတ ကင်ဂျုံအီလည်း ရောက်နေတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက သမ္မတဦးသိန်းစိန်လည်း တချိန်တည်းမှာ ရောက်လာတယ်။ နောက် အီရန်နိုင်ငံက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်း အလည်အပတ် ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ ဒါဟာ တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲ ပြောလို့ရမလား။ တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာက ဆန့်ကျင်နေတဲ့ လူဆိုး စာရင်းဝင် နိုင်ငံတွေကို ခါးပိုက်ဆောင်ထဲ ထည့်ထားတယ်ဆိုတဲ့ သဘောကို ပြချင်တဲ့သဘောလား။ ဒါမှမဟုတ် အနောက်အုပ်စု ချည်းကပ်ပုံနဲ့ တရုတ် ချည်းကပ်ပုံတွေက မတူပါဘူး။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းပြီးတော့ ဖြောင့်ဖြယူလို့ ရပါတယ်ဆိုတာကို ပြချင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောလား။
ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ။ ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ တရုတ်က သူပြောချင်တာ ပြောလို့ရတာပေါ့။ ဟို ကြည့်ကောင်းအောင် ပြောလို့ရပေမဲ့ ဒါတွေအားလုံးကတော့ သူ့အကျိုးအတွက်ပဲ သူလုပ်တာပါ။ ဥပမာ အီရန်ဆိုရင် အီရန်က ဂတ်စ်မှာဆိုရင် နံပတ် (၂)။ ရုရှားပြီးလို့ရှိရင်။ အမေရိကန်က ပြောတယ်၊ အီရန်မှာ အရင်းအနှီးလုပ်တဲ့လူတွေကို အရေးယူမယ်ပြောတယ်။ တရုတ်က ရေနံပိုက်ကြီးတခုလုံးကို အီရန်ကနေ သွယ်ထားတယ်။ ဆိုတော့ အမေရိကန်က တရုတ်ကို သွားမပိတ်ပင်ရဲဘူး။ မပိတ်ပင်နိုင်ဘူး။ ဆိုတော့ တရုတ်က အားလုံးက သူ့အကျိုးအတွက်ပဲ။ အီရန်ဆိုလည်း ဂတ်စ်၊ ရေနံတွေ ရတယ်။ နောက်တခါ ဥပမာ မြောက်ကိုရီးယားဆိုရင် ရှင်းရှင်းလေး အမေရိကန်ရှိတဲ့ တောင်ဘက်က သူ့ရဲ့  နယ်နိမိတ်မှာ ကပ်တဲ့နိုင်ငံကို သူအထိမခံနိုင်ဘူး။ အဲဒီအတွက် မြောက်ကိုရီးယား ဘယ်လောက်ပဲဆိုးဆိုး နိုင်ငံရေးအရ မြောက်ကိုရီးယား ကို ထောက်ခံပေးထားတယ်။ ဆိုတော့ ဒီဟာတွေအားလုံးကို ကြည့်လို့ရှိရင် သူက သူ့အကျိုးအတွက်ပဲ လုပ်တာ။ သူက သူ့ရဲ့  အင်အားကို စီးပွားရေးအင်အား၊ စစ်ရေးအင်အားကို ထူထောင်ပြီးမှ တဖြည်းဖြည်းချင်း ရေရှည်အတွက်ကို လက်ခမောင်းခတ်လာတာ။ ဒါတွေအားလုံးကို ကြည့်လို့ရှိရင် တရုတ်က သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကို ရေရှည်ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖော်ဆောင်နေတာလို့ မြင်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ လတ်တလောဖြစ်နေတဲ့ ယူနန်နယ်နဲ့ နယ်နိမိတ်ချင်း ဆက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ် တလျှောက်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေ။ လတ်တလောဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေက တရုတ်နိုင်ငံအတွက် အရေးမကြီးဘူးလား။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသအတွင်းမှာ ကချင်တပ်ဖွဲ့၊ ဝတပ်ဖွဲ့၊ ကိုးကန့် တပ်ဖွဲ့တွေ နဲ့ မြန်မာတပ်ဖွဲ့၊ ရှမ်းတပ်ဖွဲ့တွေကြား တင်းမာမှုတွေ ရှိနေတဲ့ဟာက ယူနန်နယ်နိမိတ်အထိ ကူးဆက်လာမယ့် အန္တရာယ်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတော့ ဒါဟာ ရေရှည်ထက်စာရင် လတ်တလောအားဖြင့် ဖြေရှင်းပေးရမယ့်ကိစ္စမျိုး ဖြစ်နေတော့ ဒီကိစ္စတွေအပေါ်ကို တရုတ်အနေနဲ့ ဘာတွေပြောလာလိမ့်မယ် ထင်သလဲ။
ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ။ ။ ဒီကိစ္စကတော့ နည်းနည်းသိမ်မွေ့တယ်။ တရုတ်က ဒါကို ခေါင်းကိုက်တဲ့ ပြဿနာ တော့ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဟာကြီးက ကြီးထွားလာနိုင်တဲ့ ပြဿနာမရှိဘူးလို့ ကျနော်ကတော့ ယူဆတယ်။ မရှိဘူးဆိုတာက တရုတ်က ဒီတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေအားလုံးက တရုတ်ကို မှီခိုနေရတယ်။ ဗမာနိုင်ငံက ဗမာအစိုးရက ဗမာစစ်တပ်က တရုတ်နိုင်ငံကို မှီခိုရသလို။ စီးပွါးရေးအရ၊ လူမှုရေးအရ အားလုံးကို ကချင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဝဖြစ်ဖြစ် အားလုံး က တရုတ်ကို မှီခိုနေရတယ်။ တရုတ်ရဲ့  သြဇာက အင်မတန်ကြီးပါတယ်။ တရုတ် မဖြစ်စေချင်တာကတော့ ပြည်တွင်းစစ် ပြန်ဖြစ်ပြီး လက်နက်ကိုင် တိုက်တာမျိုး သူတို့ မဖြစ်စေ ချင်ဘူး။ ဒီဟာကို ကစားတဲ့နေရာမှာ ဗမာအစိုးရကလည်း ဗိုလ်ကျတဲ့စိတ်ပါတယ်။ ငါတို့နိုင်တယ်။ ငါတို့ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါတယ်။ ဆိုတော့ တရုတ်က တခုရှိတယ်။ တရုတ်ကို လေ့လာတဲ့ အခါကျတော့ တရုတ်က ဘာပဲပြောပြော အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့  ဗိုလ်ကျခြင်းကို သူခံရတယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် သူက အင်မတန် လိမ်မာတယ်။ ကိုင်တွယ်တဲ့နေရာမှာလည်း အင်မတန်ချိုသာတယ်။ သူ့သြဇာကို သူသုံးပေမဲ့ မင်းတို့ ဒီလိုလုပ်ဆိုတဲ့ အမေရိကန်လို လူပါးဝတဲ့ အကျင့်မျိုး သူတို့မလုပ်ဘူး။ ဒါ ကျနော့်ရဲ့  သုံးသပ်ချက်၊ ကျနော့်ရဲ့  တွေ့ရှိချက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်က သူ့ရဲ့  အချိုးက ဘာလဲဆိုတော့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပြီး လူတွေ ဖယ်ရှားသွားတာ refugees တွေ သူ့နိုင်ငံ ရောက်သွားမှာကို သူအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ ဒီဟာကိုတော့ သူ ကိုင်တွယ်စရာ ရှိတယ်။ သူ့ရဲ့  အကျိုးကို လက်တလော ထိခိုက်တယ်ပေါ့။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ နိုင်ငံတကာ သုံးသပ်သူတွေကြားထဲမှာ တချို့ ကလည်း မြန်မာအစိုးရဟာ အစိုးရ အဆက်ဆက်ဟာ တရုတ်အပေါ်မှာပဲ အမြဲတမ်း နိုင်ငံရေးအရ၊ စီးပွားရေးအရ အစစအရာရာ မှီခိုနေကြရ တယ်လို့ သုံးသပ်ချက်ချထားတာရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တချို့ ကတော့ အဲဒီသုံးသပ်ချက်ချထားတယ်ဆိုတာ သိပ်ချဲ့ ကားလွန်တယ်။ တကယ်တမ်းကြတော့ မြန်မာအစိုးရ အဆက်ဆက်ဟာ တရုတ်အပေါ်မှာ ဒီလောက်ကြီး မှီခိုနေကြရတာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့အတိုင်းအတာအရ သူလုပ်ချင်တာကို လုပ်နေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ ထောက်ပြမှုတွေ ရှိနေတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း အနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ။ ။ တရုတ်ကတော့ အင်မတန် ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံကြီးလည်း ဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်တို့ ကံဆိုးတယ်ပဲ ပြောရမလား။ ကံကောင်းတယ်ပဲ ပြောရမလား မသိဘူး။ ကျနော်တို့က လာပြီးတော့ မိုင်ပေါင်းများစွာ ဆက်စပ်နေရတယ့်အတွက် တရုတ်က ဗမာနိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါဟာ ဘယ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ် တရုတ်ကို ရှောင်လွှဲလို့ မရဘူး။ ဆိုတော့ တရုတ်ကို ကျနော်တို့က မဆက်ဆံလို့ မရဘူး။ ဆက်ဆံရမယ်။ သို့သော် အခု လက်ရှိအခြေအနေမှာ ကျနော်တို့က မတရားမှီခိုရတာကတော့ နိုင်ငံရေးအရ ပိတ်ဆို့ခံရတာတွေရှိတယ်။ တွန်းပို့သလို ဖြစ်သွားတယ်။ ဗမာနိုင်ငံ ဗမာစစ်အစိုးရကလည်း သူတို့ စိတ်ဆိုးလာရင် ကွန်မြူနစ်နဲ့ တိုက်ခဲ့တာတွေကို ပြန် ပြန်ဖော်တယ်လို့ သူတို့ပြောတယ်။ ဗမာအစိုးရက အားလုံးထင်သလို တရုတ်ကို နားထောင်တာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့လုပ်ချင်တာ လုပ်တာတွေရှိတယ်။ ဗမာ အစိုးရ အနေနဲ့ အခြေအနေအရသော်လည်းကောင်း တရုတ်ကို အားကိုးရပေမယ့် တရုတ်ဆီက ယူစရာတွေ အများကြီး ရှိသလို၊ တရုတ်ကို ကျနော်တို့ အသုံးချနိုင်လို့ရှိရင် ဗမာပြည်အတွက် အကျိုးရှိတာတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ သို့သော် မသုံးတတ်ရင်၊ မကိုင်တွယ်တတ်ရင်တော့ ကျနော်တို့ စီးပွားရေးကျွန် ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါက ကျနော်တို့အတွက် အန္တရာယ်ရှိတယ်။
By ဦးအောင်ခင် & မညိုညိုလွင် သောကြာ, 27 မေ 2011
နယ်နိမိတ်ပြဿနာလို တရုတ်ပြည်ရဲ့  အခြေခံအကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင် အခိုင်အမာ ပြောဆို အရေးယူရမယ်လို့ တရုတ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက မနှစ်က ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအပြောမျိုးကို လက်မခံနိုင်ကြတဲ့အတွက် ဒီနှစ်မှာ လေသံပြောင်းပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကို ဦးစားပေးလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပြည်ပမှာ တရုတ်ကို မယုံသင်္ကာဖြစ်လာပြီး တန်ပြိုင်အရေးယူမှုတွေ တိုးပွားလာတယ်လို့ မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့ထုတ် ကာကွယ်ရေး စက္ကူဖြူစာတမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ နှစ်ကုန်မှာ ထုတ်နေကျစာတမ်းကို (၃) လနောက်ကျပြီး ထုတ်ဝေလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်ကာကွယ်ရေးစာတမ်းမှာ အခန်း (၁၀) ခန်းနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ (၈) ခု ပါဝင်ပါတယ်။ (၂) နှစ်တကြိမ် ထုတ်ဝေတဲံ စာတမ်းဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ရေးလမ်းစဉ်ကို ဖော်ပြပါတယ်။ ထူးခြားချက်ကတော့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်းရေးကို ရယူဖို့ အခန်း (၉) မှာ ဖော်ပြထားတာပါ။ နိုင်ငံရေးမှာ အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုရယူပြီး စစ်ရေးမှာ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံအကျိုးစီးပွားနဲ့ လုံခြုံရေးကိစ္စကို ရိုသေလေးစားပြီး တန်းတူရည်တူ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့နည်းနဲ့ စစ်ရေးယုံကြည်မှု တည်ဆောက်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မေလ (၁၂) ရက်က နေပြည်တော်ကိုလာသွားတဲ့ တရုတ်စစ်မင်ရှင်အဖွဲ့ကလည်း တရုတ်-မြန်မာ ယုံကြည်မှု ခိုင်မာရေး၊ ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းမှု အားကောင်းရေး။ စစ်တပ်အချင်းချင်းရင်းနှီးရေး စတာတွေကို တင်ပြသွားပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးမှာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့နည်းလမ်းကို ကျင့်သုံးဖို့ နိုင်ငံပေါင်း (၂၂) နိုင်ငံနဲ့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ စာတမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ နယ်စပ်နဲ့ ကမ်းရိုးတန်းဒေသ ကာကွယ်ရေးမှာ စစ်တပ်အသုံးပြုပုံအကြောင်း အခန်း (၄) မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တရုတ်စစ်တပ်နဲ့ ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေ ပူးတွဲတာဝန်ယူတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂) နှစ်အတွင်းမှာ နယ်စပ်ရာဇဝတ်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ နဲ့ မှောင်ခိုမှုပေါင်း (၄) သောင်းနီးပါးကို ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ဥပဒေမဲ့ ကိုင်ဆောင်တဲ့ သေနတ် (၄) ထောင်နီးပါး ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ရေးလမ်းစဉ်ကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အနေနဲ့ ယူနန်ပြည်နယ် ကုမင်မြို့ တော်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလက တရုတ်-အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ယူနန် နဲ့ အရှေ့ တောင်အာရှဒေသကို ကားလမ်း၊ ရထားလမ်း၊ ရေလမ်း၊ ပိုက်လိုင်း၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်လိုင်း စတာတွေနဲ့ ဆက်ထားနိုင်တဲ့အတွက် ကုန်သွယ်မှု တိုးပွားလာပါတယ်။ တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေးမှာ ယူနန်ပြည်နယ် အရေးပါနေတာကို ကုမင် အစည်းအဝေးက သက်သေပြနေပါတယ်။ ကုမင် ညီလာခံကျင်းပနိုင်အောင် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အာဖရိက ခရီးစဉ်ကို ရွှေ့ ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်ကို ယုံကြည်လာအောင် စည်းရုံးရာမှာ သံတမန်ရေးရာတင်မကပဲ တရုတ်စစ်တပ်ကလည်း တက်တက်ကြွကြွ လှုပ်ရှားလာတာ တွေ့ရပါတယ်။
မတ်လလယ်ပိုင်းက မေလလယ်အထိ မြန်မာ၊ နီပေါလ်၊ ဗိယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင် နဲ့ အင်ဒိုနီးရှား ကို ထိပ်တန်း တရုတ်စစ်မစ်ရှင်တွေ စေလွှတ်ပါတယ်။ ဗဟိုစစ်မစ်ရှင်နဲ့ စစ်ဦးစီးဌာနအဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဦးဆောင်တဲ့ စစ်မင်ရှင်တွေ စေလွှတ်တဲ့အစဉ်အလာ မရှိခဲ့ပါဘူးလို့ တရုတ်အစိုးရ စာနယ်ဇင်းက ဆိုပါတယ်။ စီးပွားရေးနဲ့ စစ်အင်အားကြီးမားလာတဲ့ တရုတ်အန္တရာယ်ကို စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုကြောင်း ထိပ်တန်းစစ်မင်ရှင်တွေက ရှင်းပြကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကိုတော့ နိုင်ငံရေးဗျူရို အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နဲ့ အမျိုးသားကွန်ဂရက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျာချင့်လင် (Jai Qinglin) ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ ဗဟိုစစ်မင်ရှင် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရှီဟိုင်ဟို (Xu Caihou) ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ ဧပြီလ နဲ့ မေလမှာ သွားရောက်ပြီး နယ်စပ်ပြဿနာ ပူးတွဲဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရသစ်ဟာ နယ်စပ်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အစွမ်းကုန် ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောဆိုသွားကြပါတယ်။
ရှေ့ နှစ်မှာ တရုတ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အပြောင်းအလဲဖြစ်လာရင် ပါတီနိုင်ငံရေး ဗျူရို၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီ နဲ့ ဗဟိုစစ်မစ်ရှင်မှာလည်း အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပေမယ့် ကာကွယ်ရေးလမ်းစဉ်မှာ ပြောင်းလဲမယ့် အလားအလာ မရှိဘူးလို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်။ သြဇာခံနယ်မြေ တည်ထောင်ဖို့ စိတ်မကူးကြောင်းနဲ့ စစ်ရေးနယ်ချဲ့ ဖို့လည်း မရည်ရွယ်ကြောင်း ကြေညာပြီး မိမိအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်တဲ့ လမ်းစဉ်ကိုသာ ကျင့်သုံးမယ်ဆိုပေမယ့် ကမ္ဘာအနှံအပြားမှာရှိတဲ့ တရုတ်အကျိုးစီးပွားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဘောထားကို ရှင်းပြထားတာ မတွေ့ရပါဘူး။
တဖတ်နိုင်ငံက စစ်တပ်နဲ့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးအောင် ကြိုးပမ်းပြီး အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒေသဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် စစ်ရေးမှာ ယုံကြည်မှုရအောင်လုပ်တဲ့နည်းဟာ အထိရောက်ဆုံး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စစ်ရေးမှာ အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှု ရှိလာရေးကို တရုတ်ကာကွယ်ရေးစာတမ်းမှာ အတော်လေး အသားပေး ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေကြောင်းပိုင်နက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဂျပန်၊ ဗိယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်စတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ပြဿနာဖြစ်တာကိုတော့ မဖော်ပြပါဘူး။ ဒါကြောင့် တရုတ်နဲ့ ဗမာစစ်တပ် ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ဖို့သာ ရှိပါတယ်။
စုတ်ချက်ပြင်းတဲ့ ဘရိုက်တန် မြန်မာ့ပန်းချီ
အေးနှင်းညို | တနင်္ဂနွေနေ့၊ မေလ ၂၉ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၂၄ မိနစ်
အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ဘရိုက်တန် အနုပညာပွဲတော် ကျင်းပရာ ဘရိုက်တန်ကမ်းခြေ ဘူတာရုံကို ရောက်ရောက်ချင်းမှာဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓာတ်ပုံပါတဲ့ ပွဲတော် ကြော်ငြာစာတမ်းတွေ ၊ နံရံကပ်ပိုစတာတွေက ပွဲတော်လာ လူထုကို ဆီးကြိုသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဘူတာရုံထွက်ပေါက် ရောက်ပြန်တော့လည်း အသက် ၅ဝ ကျော် အမျိုးသားတဦးက ပွဲတော်ဆီကို ဘယ်လိုသွားရမယ် ဘယ်နေရာမှာ ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ လက်ကမ်းကြော်ငြာ မြေပုံတွေကိုင်ပီး မသွားတတ် မလာတတ်တဲ့သူတွေကို လမ်းညွှန်ပေးဖို့ အသင့်စောင့်နေတာကို မြင်ကြရပါတယ်။
ဘူတာရုံရှေ့က လမ်းမကြီးကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း တမြို့လုံးနီးပါး လမ်းမီးတိုင်တွေမှာ ဒေါ်အောင်စုကြည်ပုံနဲ့
အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဆိုအမိန့်တခုဖြစ်တဲ့ “Use Your Liberty to Promote Ours’” “ရှင့်ရဲ့ လွတ်လပ်မှုကို အသုံးချပီး ကျမတို့တတွေ လွတ်လပ်လာအောင် ဝိုင်းဝန်းပါ” ဆိုတဲ့ စာတမ်းပါ ပိုစတာတွေ လေထဲမှာ တလူလူလွင့်နေပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဲဒီနှုတ်ထွက်စကားဟာ အခုဆိုရင် လူတိုင်းနှလုံးသားထဲ၊ အသဲထဲမှာ စွဲနေတဲ့စကားတခုဖြစ်နေပါပီ။
ကမ္ဘာ့တဖက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ မလွတ်လပ်သေးဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်း ဘရိုက်တန်မြို့ ကနေ တကမ္ဘာလုံးကို လှုပ်နှိုးနေသလို ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေအတွက် ဝမ်းနည်းတဲ့ ခံစားချက်ကိုပါ ရနိုင်ပါတယ် ...
ဒီလို ကိုယ့်နိုင်ငံက ခေါင်းဆောင်တဦးပုံကို နေရာတိုင်းမှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ မြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်ရတဲ့
မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းလိုလို ကိုယ့်ခေါင်းဆောင်အတွက် တနည်းတဖုံ ဂုဏ်ယူသလိုမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချိန်ထဲမှာဘဲ ကမ္ဘာ့တဖက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ မလွတ်လပ်သေးဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်း ဘရိုက်တန်မြို့ကနေ တကမ္ဘာလုံးကို လှုပ်နှိုးနေသလို ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေအတွက် ဝမ်းနည်းတဲ့ ခံစားချက်ကိုပါ ရနိုင်ပါတယ်။
တမြို့လုံးနီးပါး လမ်းမီးတိုင်တွေမှာ ဒေါ်အောင်စုကြည်ပုံနဲ့အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဆိုအမိန့် စာတမ်းပါ ပိုစတာတွေ လေထဲမှာ တလူလူလွင့်နေပါတယ်။ (ဓာတ်ပုံ-အေးနှင်းညို)
အနုပညာပွဲတော် အခင်းအကျင်းအဖြစ် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာပြခန်းတွေကို တမြို့လုံးနေရာအနှံ့ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီထဲက ဘရိုက်တန် ပြတိုက်မှာတော့ ခင်းကျင်းပြသထားတဲ့ အနုပညာတွေ နဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေက အတော်စုံတယ်လို့ ပြောရင် ရနိုင်ပါရဲ့။ ပြတိုက်ဝင်ဝင်ချင်းမှာဘဲ မြန်မာနိုင်ငံက ဘုရားဆင်းတုတွေ၊ ဘာသာရေးအသုံးအဆောင်တွေ၊ မြန်မာ့ရုပ်သေးရုပ်တွေ၊
ရှေးဟောင်းအဝတ်အစားတွေ စတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အခန်းတခုကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီကနေ ဘယ် ပြခန်းကိုဘဲ သွားသွား ပြခန်းတိုင်းရဲ့ ဝင်ပေါက်တိုင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပုံတူ ပိုစတာတွေ ချိတ်ဆွဲထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံ ရေးဆွဲထားတဲ့ နံရံနဲ့ ဘေးချင်းကပ်နံရံပေါ်မှာ စစ်တုရင် နယ်ရုပ်တွေကို ရွှေ့ကာရွှေ့ကာနဲ့ စစ်တုရင် ကစားနေတဲ့ မျက်မှန်တပ်ထားတဲ့ ကတုံးနဲ့ အမျိုးသားတယောက်ပုံကိုလည်း ..
ဘရိုက်တန်ပြတိုက်ကို ဘယ်ဘက်အဝင်ပေါက်က ဝင်မယ်ဆိုရင် မြေညီထပ်မှာ ကော်ဖီဆိုင်
တဆိုင်ကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပီး အဲဒီကော်ဖီဆိုင် အပေါ်ကို မော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် မြန်မာ ပန်းချီပညာရှင်တွေရဲ့ လက်ရာတွေ ချိတ်ဆွဲထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ အဲဒီနေရာဟာ မြန်မာ့ခေတ်ပေါ် ပန်းချီတွေချည်း စုစည်းပြထားတဲ့ မြန်မာ့ ပန်းချီပြခန်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပြခန်း အဝင်ဝ နဖူးစီးမှာ “Inside Stories: Paintings fresh from Burma” မြန်မာပြည်တွင်းက ဆန်းသစ်တဲ့ပန်းချီလက်ရာများ ဆိုတဲ့ စာတမ်းကို မြန်မာဗျည်းစာလုံးတချို့ သုံးပီး ရေးထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။
မြန်မာပန်းချီပြခန်းထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက ပန်းချီအနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ ခင်မောင်ရင်၊ စိုးနိုင်၊ ဝင်းတင့်၊ ဧကစာချို၊ မြင့်စံမြင့်၊ တာမလာ၊ ဇွဲရန်နိုင် နဲ့ ရဲဝင်းအောင် တို့ရဲ့ ပန်းချီတွေနဲ့အတူ လန်ဒန်မှာနေတဲ့ ပန်းချီထိန်လင်းရဲ့ ဓာတ်ပုံဖန်တီးမှု အနုပညာနဲ့ ပန်းချီကားတချို့ကို တွေ့ကြရပါလိမ့်တယ်။ ဒီပြခန်းကို လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သူတိုင်း မြန်မာတို့ရဲ့ အနုပညာ ဖန်တီးမှု စွမ်းရည်ကို မြည်းစမ်းခွင့်ရမှာ ဧကန်မုချပါပဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံရေးဆွဲထားတဲ့ နံရံနဲ့ ဘေးချင်းကပ်နံရံပေါ်မှာ စစ်တုရင် နယ်ရုပ်တွေကို ရွှေ့ကာရွှေ့ကာနဲ့ စစ်တုရင် ကစားနေတဲ့ မျက်မှန်တပ်ထားတဲ့ ကတုံးနဲ့ အမျိုးသားတယောက်ပုံကိုလည်းဆွဲထားတယ်။ (ဓာတ်ပုံ-အေးနှင်းညို)
အဲဒီပြခန်းကနေ ဆင်းလာရင် ညာဘက်ဘေးမှာ စားပွဲခုံခပ်ကြီးကြီးတခု ခင်းကျင်းထားပီး အဲဒီပေါ်မှာ Burma Campaign UK က ထုတ်ဝေထားတဲ့
မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း မိတ်ဆက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မျက်နှာဖုံးပါစာအုပ်တွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုနိုင်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။
အဲဒီစားပွဲမှာထိုင်နေတဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား အမျိုးသားတဦးက Free Burma ဆိုတဲ့ စာလုံး နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုံပါ တီရှပ်ဝတ်ကာ
ပြတိုက်ထဲဝင်လာသမျှလူတွေကို မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း အခါအားလျော်စွာ ရှင်းပြနေသလို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုကြဖို့ တိုက်တွန်းနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ဘရိုက်တန်ပြတိုက်ကနေ မြို့ထဲကို ဆက်လျှောက်မယ်ဆိုရင် မြို့လယ်ခေါင်က ပေ ၃ဝ ကျော်မြင့်တဲ့ အဆောက်အဦးနံရံတခုမှာ အင်္ဂလိပ် အနုပညာရှင် ၃ ယောက် graffiti လို့ခေါ်တဲ့ ခေတ်ပေါ်မှုတ်ဆေးတွေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုံတူ ရေးဆွဲထားတာကိုလည်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပုံထဲက
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မျက်လုံးတွေဟာ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ အရောင် တဖျတ်ဖျတ်တောက်နေတယ်လို့ မြင်ရသူတိုင်းတွေးနိုင်လောက်အောင် ထူးထူးခြားခြားရေးဆွဲထားတာကို သတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။
Burma Gaze လို့ အမည်ပေးထားတဲ့
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက လူငယ်၊ လူကြီးတွေရဲ့ ခံစားချက်ပေါ်လွင်လှတဲ့ ကိုယ်ဟန်အနေထား
တွေကို ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ စုစည်း
ကံအားလျော်စွာလို့ ပြောရမလား။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံ
ရေးဆွဲထားတဲ့ နံရံနဲ့ ဘေးချင်းကပ်နံရံပေါ်မှာ စစ်တုရင် နယ်ရုပ်တွေကို ရွှေ့ကာရွှေ့ကာနဲ့ စစ်တုရင် ကစားနေတဲ့ မျက်မှန်တပ်ထားတဲ့ ကတုံးနဲ့ အမျိုးသားတယောက်ပုံကိုလည်း
တွေ့ရမှာပါ။ အဲဒီပုံမှာ ရေးဆွဲထားတဲ့ စစ်တုရင်နယ်ရုပ်ကလေးတွေဟာ တင့်ကားတွေ အမြှောက်တွေ သံချပ်ကာကားတွေက ဘုရင်နဲ့ မိဖုရားကို ၂ ထပ် ၃ ထပ် ကာကွယ်ထားသလိုမျိုး ပတ်ချာလှည့်ချထားပါတယ်။ ဒီနံရံတွေပေါ်က မှုတ်ဆေးနဲ့ ဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီလက်ရာ ၂ ခုကို မြင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း နဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို သိကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတိုင်းက လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေကို ပြေးမြင်မိမှာ ဧကန်ပါ။
အဲဒီနံရံမှုတ်ဆေးပန်းချီတွေရှိတဲ့ နေရာနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ Burma Gaze လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက လူငယ်၊ လူကြီးတွေရဲ့ ခံစားချက်ပေါ်လွင်လှတဲ့ ကိုယ်ဟန်အနေထားတွေကို ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ စုစည်းပြသထားတဲ့ ဓာတ်ပုံပြခန်းတခုကိုလည်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြခန်း အဝင်ဝ နဖူးစီးမှာ “Inside Stories: Paintings fresh from Burma” မြန်မာပြည်တွင်းက ဆန်းသစ်တဲ့ပန်းချီလက်ရာများ ဆိုတဲ့ စာတမ်းကို မြန်မာဗျည်းစာလုံးတချို့ သုံးပီး ရေးထားတာတွေ့ရတယ်။ (ဓာတ်ပုံ-အေးနှင်းညို)
တလကြာ ကျင်းပနေတဲ့ ဘရိုက်တန်ပွဲတော် တခုလုံးမှာ မြန်မာအနုပညာရှင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အကြောင်း ကြိုကြားကြိုကြား ပြသခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရ ပါတယ်။ တခုချင်းစီကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဘဝအကြောင်းကို ပြောပြတဲ့ The Lady of Burma ပြဇာတ်၊ Lady of No Fear ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်၊ Burma Solider ဆိုတဲ့ မြန်မာစစ်သားတဦးရဲ့ ဘဝကောက်ကြောင်း၊ တခါ ၂ဝဝ၇ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးအကြောင်း Burma VJ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်၊ ကရင်တိုင်းရင်းသူ နန့်ဇိုရာဖန်းရဲ့ ဘဝအကြောင်းကို ရေးထားတဲ့ Little Daughter စာအုပ် မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပွဲ၊ What next? The Future of Burma ဆိုတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပန်းချီထိန်လင်းရဲ့ စုတ်တံမရှိဘဲ ပန်းချီဆွဲနိုင်တဲ့ ဖန်တီးမှုအနုပညာ ကလည်း ပြပွဲလာ ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။
အခုကျင်းပနေတဲ့ ပွဲတော်မှာ ခင်းကျင်းပြသထားတဲ့ မြန်မာ့ အနုပညာတွေမှာ ပန်းချီဆရာ လက်စမသတ်သေးတဲ့ပန်းချီတွေ၊ စုတ်ချက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ချယ်မှုန်းထားတဲ့ ပန်းချီကားတွေပဲ များနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှေ့လာမယ့်နှစ်တွေမှာ ကျင်းပမယ့် ဘရိုက်တန်အနုပညာပွဲတော်မှာ လှပနူးညံ့ အရောင်အသွေးစုံတဲ့ မြန်မာပီပီ အနုပညာတွေ စုံစုံလင်လင် ပြနိုင်တဲ့ ပြခန်းမျိုး ပါဝင်ဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
အမှုပိတ်ရန် လက်မှတ်မထိုးသည့် အလုပ်သမများကို ရဲအာဏာပ...
ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ် နှစ် ၁၀၀ ပြည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ...